မတ်သာင်: January 2009
နိုင်ငံရေးမှာ စီးပွားရေးသမားတွေ ၀င်လာပြီဆိုယင် မကောင်းတော့ဘူး။ စီးပွားရေးသမားတို့မှာ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးပဲ သုံးမယ်။ ဈေးနှိမ်ခြင်းနဲ့ ဈေးမြှင့်တင်ခြင်းပါ။ နိုင်ငံရေးမှာ ပိုက်ဆံပေးပြီး အပေးအယူလုပ်လို့ရလောက်အောင် အပေါစားမဆန်ဘူး။ နိုင်ငံရေးကို ဈေးကစားသလို မကစားသင့်ပါ။
ပျော့ပျောင်းမူဝါဒနဲ့ အညံ့ခံမူဝါဒ မတူညီပါ။ နိုင်ငံရေးတက်သစ်စတို့ သတိမူကြပါ။ အာဏာရှင်တို့အကြိုက် လူမိုက် မလုပ်ကြပါနဲ့။ သံသယရိုက်ချက်မှာ ရိုက်သူမှာလည်း တစ်ဝက်ပိုင်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ သူ့အပြောသူ့အလုပ်ကို ကြည့်ရုံနဲ့ သူ့သဘောကို သိနိုင်ပါတယ်။
စစ်ရေးမှာ အပျော်တမ်းတပ်ဖွဲ့ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကို အပျော်တမ်း ၀င်မလုပ်ပါနဲ့။ ဘောပွဲတစ်ပွဲလောက်တောင် ပျော်စရာမကောင်းပါ။ လမ်းဆုံလို့ ကြုံရာမှာ ဂွင်ဖမ်းချင်တယ်ဆိုယင် နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အရာဟာ အကြံအဖန်လုပ်လို့ သိပ်မကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပဲ။
စစ်အစိုးရဆိုတာ ချိုနဲ့လား ဘာမှန်းမသိဘဲနဲ့ ဒေါ်လာတစ်ထောင်နှစ်ထောင်လောက်ရင်းပြီး အချိန်တိုအတွင်း စူပါစတားဖြစ်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ ဟိုလူက အကျင့်ပျက်နိုင်ငံရေးသမား၊ ဒီလူက ရန်သူသူလျှို လက်ညှိုးထိုးနေလေရဲ့။ တော်လှန်ရေးဆိုတာ ရေရှည်သွားရကောင်းမှန်းလည်း နားမလည်ဘဲနဲ့ မဲမဲမြင်တိုင်း ပစ်ခိုင်းနေကြသတဲ့။
နှစ်ပေါင်း (၅၀) ကြာညောင်း အချိန်တွေ နှောင်းခဲ့ပြီ။ အောင်ပွဲနဲ့ဝေး တဖြေးဖြေးလုံးပါးနေပြီတဲ့။ နိဗ္ဗာန်ခရီးကို အတူနှင်ရင်း သံဃာတွေ ဂိုဏ်းများကွဲကုန်သလို အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးခရီးမှာလည်း သံသယတောနက်ကြီးမှာ အသက်သွေးပေါင်းများစွာ ကျခဲ့ရပြီ။ နှစ်ပေါင်း (၅၀)ရပ်တည်နိုင်တာကို တို့တတွေ ဂုဏ်ယူသင့်လျက် အပြစ်ပဲတင်လေရော့သလား။
ဖခင်ခေါင်းမှာရှိတဲ့ယင်ကောင်ကို ပုဆိန်နဲ့ပေါက်တဲ့သားငယ်လို သတ္တိကြောင်ပြီး အတွေး မခေါင်ကြပါနဲ့။ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကို ဘယ်သူမှ မလှန်ရဲဘူး၊ ကျုပ်ပဲ ဝေဖန်ရဲတယ်၊ ကျုပ်က လူကြီးဆိုတာလည်း နားမလည်ဘူး၊ ပညာတတ်ဆိုတာလည်း မမှုဘူး၊ ကျုပ်က အမှန်ကိုပဲ ပြောတယ်တဲ့။ ကိုင်း…အမှန်တရားကို ဘယ်သူက မှတ်ကျောက်တင်မလဲ။ အလာကောင်းပေမယ့် အနှောင်းမသေချာတဲ့လူတွေလည်း အများကြီးပါ… သူငယ်ချင်း။ လူတစ်ယောက်ကို မင်းသစ္စာမဲ့ယင် လူအများကြီးလည်း မင်းကို မယုံတော့ဘူးဆိုတာ သိပါ။
ထင်ပေါ်တဲ့လူတွေကို တိုက်ခိုက်ပြီး စတန့်ထွင်တဲ့နည်းက ခေတ်ကုန်နေပြီ။ တကယ်လို့ တစ်နေရာရာမှာ ဒီနည်းကို သုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုယင် အဲဒီနေရာဟာ ၂၁ ရာစုမှာ ရှိတဲ့နေရာတစ်ခု မဟုတ်ဘဲ ဟို…၂၀ ရာစုခေတ်ဦးမှာ ကျန်နေရစ်တဲ့ လူမှုဝန်းကျင်တစ်ခုပေါ့။ ၂၁ ရာစုမှာ ဖြီးတိုင်း မယုံတော့ဘူး ကိုယ့်လူ။
အလားအလာကောင်းတဲ့လူကို မဟုတ်မမှန်သတင်းတွေ ဖြန့်ပြီး ဘ၀ဖျက်ခြင်းဟာ အချင်းချင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ မဟုတ်ဘူး။ ရန်သူတို့ မချွတ်ပြုရမယ့်ညစ်ညမ်းအလုပ်တစ်ခုသာ ဖြစ်တယ်။ ရန်သူအတွက် ပြတင်းပေါက် ဟပေးခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ သူခိုးကို ဓားရိုးကမ်းခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ အာဏာရှင်ကို မုန်းတယ်ဆိုယင် အာဏာရှင်ကို မမွေးမိစေနဲ့။ ရန်သူကို မုန်းတယ်ဆိုယင် ရန်သူ့အကျင့်ကို မကျင့်ပါနဲ့။
တော်လှန်ရေးဆိုတာ သွေးဆာလို့ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်တယ်။ တော်လှန်ရေးအမွေဆိုတာ မုန်းတီရေး မဟုတ်ဘူး။ ချစ်ကြည်ရေး ဖြစ်တယ်။ နားလည်မှု၊ ချစ်ကြည်မှု အားနည်းလို့ပဲ ဒီခရီး ဒီမျှကြာနေရတာပေါ့။ မသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်ပြီး လူဖျက်မလုပ်ပါနဲ့။ အမှန်နဲ့အမှားကို ငြင်းနေချိန်မှာ ရှေ့ဆက်သွားပါ။ ကြောင်ပြီး နားစွင့်တဲ့သမင်ငယ် မုဆိုးရဲ့သားကောင်ပဲ။
Posted by မတ်သာင် at 3:20 AM No comments:
Mon Cultural Dance to be performed in Ivy Tech Community College
Mon Cultural Dance
Ladies and gentlemen, first of all, I would like to takeaprivilege to say thanks for your present at our performance. Before I go through about Mon Cultural dance, let me introduce you about the Mon people. Mon is an Austro-Asiatic family and from China migrated down to South-east Asia as early as 3000 BC. They established centers of settlements in Central Burma and Central Thailand especially in the Irrawaddy Delta and Chao Phraya valley farther down to the eastern coasts of Bay of Bengal. They constructed irrigation systems and developed commercial and cultural contacts with India as early as 3rd BC. They introduced rice to Aryan in India in the exchange of religions. Theravada Buddhism has since then beenaprominent religion of Mon people while Hinduism playedavery important role in the elite rites and rituals. Therefore, it can be said that Mon cultures, based on centuries long ancestral traditions and developed with Indian philosophy, is considered as the forerun phenomenon of Burmese and Thai cultures.
Ladies and gentlemen, there are twelve months in Mon Lunar Calendar and it is each respectively decorated with folk-songs and folk-dances. They have folk-tales to tell their children in bedtime. They have ballads or poems to recite or sing in their wedding party. They have folk-dance to describe their life in the paddy farms. Our dance is participatory and traditional. Since it is one of the oldest and most prestigious, it is originated by the agricultural, classical, social and royal Mon for secular and sometimes for ritual purposes. It is an art form of South-east Asian heritages.
Ladies and gentlemen, we have many types of musical instruments. Our air-instruments are peerless, and drums are unparalleled. Our three-stringed violin (notice that is not six) named “Kyam” was entertained in China in 9th century AD and this type of violin is kept up to the present days. There are other various musical instruments such as gongs and bamboos. They are named “Baat”. If the instrument is attached ten gongs uprights in circle, it is called “Baat Kon Joh” meaning instrument of ten off-springs. If it is inaform of box with ends gradually rising up from the center and havingagraduated series of bamboo slats fastened to two parallel cords along its length, it is called “Baat Talaa”. Haw (a clarinet), Hta Dee (small cymbals), and karaap (bamboo clappers), are also called drums and played by anyone apparently led by the leader of the orchestra. For now, you will not see these instruments but hear them in the background music during our dance is being performed.
Ladies and gentlemen, since we lost our sovereignty to the Burmans in 1757 AD, we have beenapeople withoutacountry and it has beenalong and hard journey for us to keep our cultures survival in Mon State, Burma. However, thank to everyone that gaveasanctuary to Mon, the exodus people from Monland, and for their cultures to shelter and rise once again here in Fort Wayne, Indiana.
Ladies and gentlemen, again let me mention that we are honored all of you are with us. We are proud to haveachance to perform you our cultural dance. Please enjoy and haveagood time. Thank You.
Posted by မတ်သာင် at 3:12 AM3comments:
ဒ်ှက႞ဲုမ္ဂး ကာလဆုဪပၝံက် စွံသ္တိကုဪပံက်ညိ။ ဘ၀မန်မွဲပၝံက် လမ္စံက်ဟာဗုဟာ ဗ္စာကုဪမာန်ဟာ။ ဆုဪပၝံက်မ္ဂး စႝးမဒးကယျာန်ဓ၀ါတ်ညးသ္ကအ် တတ်ကေႜာံမွဲစွံညိ။ အဃောမဒးပႜံင်တရၜ ဂႜံင်ဒှ်္ဘါ သွာင်မ္ဂး သွာင်ဇကုမအာ ကုဪတၞးဇးညိ။ ညး္ဘါ သွာင်မရဲုစှ် ဟွံဒ်ှမွဲမ္ဂး ဗွဲတွုဪမအောန် ဒႝဲာဒတန် မွဲဒႝဲာ သ္ဂောံကလေင်ဆုဪညးသ္ကအ်မာန်ပႜန် ဖျေံဖျန်လ၀်ထေက်ရ။ သွာင်္ဘါဂှ် ဒ်ှမံင်ပႛဲဝင်သ္ပ၀်မ္ဂး တိတ်ဟွံဒး အာမွဲစွံပႜန် စိုတ်လ္ပကုဪဇေႝာ် တော်လ္ပကုဪဂေႜံ။
ဖျဲာမ္ဂး ဒးပဵ ဖျာ်မ္ဂး ဒးပါ် ဆဂးဂှ် သ်ာဗြာ်ဍေံကုဪတီကီု။ စန်ဗိုန်ယိုက်ဏာ ဇြိုင်သာရောဟွံတီမ္ဂး ညှလေ၀်သာဟွံမာန်။ ပုင်မွဲထၞတ်ဓ၀် လ္ပပံင်မအဍုဪတွုဪညိ။ နွံအကေင်လေင်စိင်ဂးတဲု ထႛိင်ဒး ဇြုံဍ်ာဂှ် ဟွံဒ်ှဆဆုဪ ဆဂး လ္ပကုဪစိုက်ဒးဇြုံဗဲုညိ။
ကွာ်တရၜမ္ဂး ဂႜံင်ပ်ါတွုဪရ။ အရံင်မွဲသ်ာဓ၀် ဟွံဒ်ှစက္က၀ါ။ မှာကုဪဒး ဓဗးကေတ်ဟွံတီ။ အီမံင်လေ၀် စိုတ်ဟွံမိပ်နွံ။ ဗြီမံင်ဖိုဟ် ဂြိုဟ်စာမာန်ဏီ။ ပေႝာဝ်သတ်ဂမႜိုင် သတ်ကိတ်ပၞတ်ဂှ် ဖေက်အိုတ်ရ ကႜသ္ဂး။ ပြံင်လှဲာလေဲာသွာ ပၞာမတ်ဗြဲကီုသွံ။
ဒၞာနူဍ်ာသဲာမွဲထႝဟ် ဍုင်ဗြာန္နသှလီုဂး။ ကာလဍေံမိက်သ္ဂောံလီုဂှ် မွဲထႝဟ်ဟွံမွဲလေ၀် လီု။ စိုတ်မိက်သ္ဂောံပလီုဟွံမွဲကီုလေ၀် မိက်သ္ဂောံဆုဪဍေံလီုနွံမ္ဂး မုတေၞင်ရော။ လဟီုပွဝွံ ဒ်ှလဟုတ် ဖုဪရောင်တီမ္ဂး လ္ပသီဗေ႟ာဝ်လ၀်ဍေံတှေ် ဟွံခိုဟ်ဟာ။ ဂကူပျူဂွံကႜက် ပျူကုဪပျူ ကမႜက်မံင်ညးသ္ကအ် ပွိုင်(၂၀၀)သႝာံ၊ တဲုမှ ဗၞာတံ ဂွံ႞ိတ်ထောံ။
ဠာန်စမွဲတဲတဲု ဒုင်ဝန်မ္ဂး သရာံပါပ်ဂှ် ပိုတ်အ္ဘာိုတ်ဂ်ှရ။ မိက်သ္ဂောံဂြောပ်ဒုဟ်ဠာန်ဂ်ှမ္ဂး ဠာန်တဲုဠာန်ပႜန် ဒးဂေတ်လန်ပွူဟွံအောန်ရ။ ပွဇကုမဆန်္ဘန်လ၀်ဂှ် ဒ်ှဂြပ်ဇကုအပိုင်တဲု အစောန်စရဲာဇကုဟွံမွဲမ္ဂး လ္ပဂႜဲာဒုဟ်တွှဝါရညိ။
မန်ကေႜာန်ကမေႜာန်ဟွံဒ်ှမ္ဂး ဗျိမန်၊ မန်ဟွံညှသာမ္ဂး ဗျိမန်၊ မန်ဟွံဂွံဍုင်မ္ဂး ဗျိမန်၊ မန်စကာ ဟွံဂွံမ္ဂး ဗျိမန်… မန်ကုဪမန်ရ အာညးသ္ကအ်မွဲစွံဟွံဂွံမ္ဂး လ္ပထ႟းကသံက်ကုဪညးတႝဟ်ရ။ ဇၞာပ်ကေင်ကာဇကုဟွံစိုပ်ဒတဲု ပ္တိုန်ဒုဟ်ကုဪသႝမ္ဂး ဂုဏ်စရဲာသႝဟွံသ၀်စှေ်။
တႜဗန်ဟီု မင်ဗုဪမံင် အဲဟွံမွဲမ္ဂး သ္ဂောံဆုဪရ။ ဗညာဒလဟီု တႜဗန်ဟွံမွဲ မုဒ်ှရော။ အိုတ်တႝုင် အံင်ဇဲယျ ပိုက်ကသော် ဍုန်စထောံ သ္ဘီုိုပ်္ဘါ။ ကောန်္ဘိုပ်တံဂှ် ဍေံကြိုင်လ၀်တဲု ကာလဍေံ မိက်သ္ဂောံဗုဪမ္ဂး ဍေံဗ္ဇုဪ၊ ကာလဍေံမိက်သ္ဂောံကလင်မ္ဂး ဒးဂြၜ၊ ကာလဍေံဗျုဪမ္ဂး ဒးလုပ်ထၞဲာသွ ဒုဪလၞုဟ် တိတ်ဗႜးနူဘ၀ဍိက်ပႜက်ဟွံမာန်ဏီ။ ပႛဲကုဪတၝဲဏံ ပဦုကုဪပဦု စွံ႞ုဟ်မးညးသ္ကအ်ဟွံလေပ်မ္ဂး ဗီုလုဪသ္ဂောံဗတိုက်သႝရော။ ဟွံဆာန်ဍူကောန်တဲု သေက်ဇုဪကေတ်သၞးရဟာ မိမမန်တံ။ ဆာန်ကောန်ဗီုကၞီ၊ တရၜမနွံဒးအာဏောင် ဒေါအ်ဟွံဂွံဂးတဲု ဆုဪတၞအ်မွဲမလ္ဒောဝ်ဂႜံင် တၝိန်ယိုက်ကႜဟ်ဏာ လက်ကရၜတေံ ဒတုံဒးကောန်ချိုတ်မွဲ ဆုဪတၞအ်မွဲမတှေ် ကောန်ချိုတ်မွဲ အာမံင် ကာလဂွံဆုဪသၝိသဲာ ဂွံဗ္စဲာကုဪကောန်ဂှ် ကလေင်ရံင်မွဲဟွံသှေ် ဗီုဂှ် လ္ပကုဪဒှ်။
အိက်ဘိင်လေ၀် မန်ရ။ အိက်အရက်လေ၀် မန်ရ။ အိက်ဖေ၀်လေ၀် မန်ရ။ ဗြၜစရဲာဍုင်လေ၀် မန်ရ။ ဒ်ှမံင်ကသံက်သႜာလေ၀် မန်ရ။ ဒ်ှမံင်ခၜဒုတ်လေ၀် မန်ရ။ ဒ်ှမံင်ယဲအေတ်လေ၀် မန်ရ။ မွဲသ္ကုတ်ဓ၀်လေ၀် မန်ရ။ မွဲကရေက်ဓ၀်လေ၀် မန်ရ။ ဍုဟ်ဇကုလေ၀်မန်ရ။ စှေ်စးကုဪဇကု လေ၀်မန်ရ။ ကမေႜာန်ပဦုပတဲုဟွံတဲုဂှ် ညးတံပတဲုတဲုမံင်တၞာဂလိုင်ရောင် လ္ပ၀ိုတ်စအိုတ်ညိ။ ပဦုဆာန်မန်မ္ဂး မန်တံဏံလေ၀် ပဦုသ္ဒးဆာန်ကီုဏောင်။
၂၀၁၀ ဏံ ဍေံရဲုမဲာဏောင်ဂး။ ကမေႜာန်သႝသႝကေႜာန် ကမေႜာန်ပဦုပဦုကေႜာန်။ နူကုဪဒးတက်မံင် ကျာပရူကမေႜာန်သႝကႜးကႜးဂှ် တုပ်မံင်ညံင်ကုဪလၜစမံင်ကုဪဍေံ မုကမေႜာန်ပဦုပလေ၀်လ၀် ဟွံမွဲ။ အစှဇန်(က)မွဲဓ၀်ဟွံဂွံ အစှဇန်(ခ)လေ၀် စွံလ၀်ထၞတဲကီု။ ကာလလဆောဝ်အဲချပ်… ဂလိုင်ပဦုကျာမံင် ပႛဲပေဵကောံဓရီုဂှ် စှေ်ထောံကမေႜာန် ကေႜာန်ထောံအခိင်အပုဪ ဂွံသြန်ကုဪ ထောံရဲပႜန်ဂတးဂှ် ခိုဟ်ညိဏီဟာဟွံတီ။
ဍေံကေႜာန်သ္ဘင်သှကႜှ ဂေႜဲာဗက်အာဍေံ၊ ဍေံကေတ်ဆန် ဍံင်ဗက်အာဍေံပႜန်၊ ဍေံရဲုမဲာဏောင် ကယျာန်မံင်ညးသ္ကအ်ဣယျ။ ပႛဲသႝတံ အစှဇန်ဇမႜိင်(၃၀)သႝာံနွံမ္ဂး ပႛဲပဦု မုအစှဇန်နွံကီုရော။ မဟာဗျူဟာပဦု ဖျေံဖျန်လ၀် ဟွံမွဲမ္ဂး ဟှဗက်အာ ဍ်ာဝဲသႝ ဒုဪကုဪက၀်တူရ။
ကႜာတေံ ဗၞာတံဂှ် ကႛိုပ်ဖာအောန် ပဦုဂှ် ကႛိုပ်ဖာဂႜိုင်။ ဍေံတံ လိက်ဟွံမွဲ၊ နန်ထ၀်ကႛိုင်ဗတာင် လေ၀် ဟွံမွဲ၊ ပရေင်အုပ်ဓုပ်လေ၀် ဟွံတီ။ လိက်လေ၀် ကေတ်နူမန်၊ မန်ရ သိုင်ကုဪ၀င်နန်၊ မန်ရအုပ်ဓုပ်ကုဪစႝးဗၞာ။ ပွိုင်ကုဪကႜံသႝာံ ပႛဲနန်ဗၞာ စကာကႜုင်လိက်မန်အရေ၀်မန်။ မုဒ်ှဗၞာတံ ဟွံဒ်ှအာမန်မွဲသာ် မန်နူသဓီုစိုပ်အာဖကာံဂမႜိုင်ဟေင် သ္ဂောံကေႜံကႜက်အာရော။ အဲဒးဂးညိ ပႜန်…အခိင်ဆီနှၜ ဟွံဂံင်ဒုင်ယၞုဂကူဇကု ဟွံကုဪဒုင်ယၞုဂကူဇကုဂှ် ဒ်ှဟိုတ်ဇေႝာ်အိုတ်ရ။
ပႜံင်တိဍ်ာဍုင်ပြန်ကုဪတိဍ်ာတံင်အူ ပတံနူလက်ထက်ရာဇာဓိရာဇ် မန်ကုဪဗၞာ ဗတိုက်ကႜုင်ပႝာန်။ စိုပ်လက်ထက်ဗညာထော (မိစၜဗု) မုဒ်ှပႝာန်ဒေါအ်အာရော။ ဗညာထောဂှ် ကေင်ဒ်ှလ၀်ဂႝကျာ် သၞိင်ဗၞာမသုန်တႜဖိုဟ် မုဒ်ှသ္ဂောံဒ်ှကႜုင်ႚကရာတ်ဗြၜဍုင်ဟံသာဝတှဏီဖိုဟ်ရော။ သၞိင်ဓမ္မစေ တှဂှ် မုဒ်ှတေႝာဝ်ႚကရာတ်ဟွံသေင်မွဲသာ် သ္ဂောံဒ်ှအာတႜညးဟံသာဝတှရော။ ဗတိုက်ပႝာန် တဲု တေႝာဝ်ႚကရာတ်မန် ချိုတ်အာအောန်မံင်။ မန်ကုဪမန်ဂစိုတ်ညးသ္ကအ် တေႝာဝ်ရာဇာဓိ ရာတ်ညးတြုံ ညးမွဲဟွံသှေ်ဂ်ှရ မိစၜဗု ဒးတိုန်ဂ္ဇံနန်။ မိစၜဗုတဲု တေႝာဝ်ဆီသၞိင်မန် ပိုတ်။ ညးကွာန်မန်သၞိင်ဓမ္မစေတှဟေင် သ္ဒးဒ်ှတႜတိ။
စိုပ်လက်ထက်သၞိင်ဓမ္မစေတ္ဘှဗဂေါလေ၀် ခဵဂမျိုဟ်ပတိုန်၊ ဂႜုင်မွဲကုဪမွဲ ညံင်ဟွံဂွံဇီုဒးညး သ္ကအ်ဂ်ှလေ၀် စွံလ၀်ပၞတ်သတိ။ ဂႜံင်အာကုဪဂႜံင်စၜ ပ်ါလ၀်ချိုတ်ချိုတ်ပႜိုတ်ပႜိုတ်။္ဘိုတ်လုဪ ကသပ်ညးခိုဟ်ရော။ သေႝာဝ်ဓ၀်လေ၀် ညးပလေ၀်။ ညးဗႝိက်ဂမႜိုင် သ္ဂောံဒ်ှတသိုက် ညးဖျေံ ကုဪသေႝာဝ်၊ ညးဍုင်သအာင်တံညာတ် သ္ဂောံဒ်ှကျာ်သြှ ခၞှတံလေ၀် ညးကုဪမံင်ကုဪစေ၀်ပေႝာန်။ ဟိုတ်နူညးအုပ်ဓုပ်ခိုဟ်တဲု တိဍ်ာရာဇာဓိရာတ်ဗတိုက်ကႜုင်ကုဪစှော်သႝာံဟွံဂွံဂှ် စိုပ်ကႜုင်သၞ၀်တဲ မန်တံရ။ ဥပဒေမန်ဂှ် ညးကႜဲာကုဪဘာသာဗၞာတဲု ဗၞာမတန်တၜပႛဲဍုင်ပြန်ကုဪဍုင်တံင်အူတံဂှ် မံင်သၞ၀်တဲဥပဒေမန်တံရ။
လက်ကရၜ၀ွံ သၞိင်ဒကာရတ်ပိ ဟွံပဗႝတ်ကုဪသေႝာဝ်အပါနော်ညး။ ကာလဗၞာတံင်အူတံ ထပက်ဓလူ ညးတေံလေ၀်မႝိဟ်ထံင်ပရိုင်ဗၞာ ညးဏံလေ၀်မႝိဟ်ထံင်ပရိုင်ဗၞာ မန်ကုဪမန်ဂစိုတ် ညးသ္ကအ် ကလုတ်ခိုဟ်ခိုဟ်လေ၀် ဟွံမွဲ၊ တႜပညာလေ၀် ဟွံမွဲ သှေ်မံင်ဆမႝိဟ်ယိုတ်ယိုတ် သၞးသၞး ဍေံကႜုင်သီကေတ်ဍုင်ဗဂေါလေဲာလေဲာရ။ အ္စာဝင်ဗၞာတံချူ…မန်တံဏံ သံသယပူဂုဪ၊ သံသယဒေသ၊ သံသယဂိုဏ်ဇေႝာ်မံင်။ ဍေံတံကေတ်ဇႝးမန်လေဲာလေဲာရဂး။္ဘိုတ်လုဪပဦုဒးဂိ ရော။ ဗၞာမွဲဂ်ှဟီု သၞိင်မန်ဗီုရာဇာဓိရာတ်ဂှ် ပဦုဟွံဖေက်၊ သၞိင်မန်ဗီုဓမ္မစေတှရ ပဦုဖေက်ဂး။ မုဟိုတ်ရော…ချပ်ကေတ်ညိ။ ဗီုဗၞာဓဇန်ဂှ် နဲာတံဂံင်ဓဇန်ကွေံကွေံဟာ။ ဝေင်လ္ပဠာန်ညးသ္ကအ် ဏး။ အုပ်ဓုပ်ကုဪလွဟ် ကေုာံ အုပ်ဓုပ်ကုဪကႛဟ် ညးဂ်ှခိုဟ်ရော။
စိုပ်လက်ထက်သၞိင်ဗၞာ ဖရင်နံင် အမာတ်မန်ဗညာဒလ ချပ်ကသပ်ဂစိုတ်ညးတေံ ဗႝတ်ပိဝါကီု လေ၀် မုဒ်ှဖရင်နံင် ဟွံဂစိုတ်အမာတ်မန်ဗညာဒလရော။ ဒၞာနူကသပ်ဇေႝာ်ရောင်။ စႝးဂှ် ဗညာဒလအာဗတိုက်ထောံဍုင်သေံ၊ ဍုင်လၜ၊ ဍုင်ဂလာ ဗ္ဂိန်ကွဲာကုဪဖရင်နံင်ဏီ။ ဗီုတိဍုင်မန် ဗၞာတၝဲဏံဂှ် ညးတႝဟ်ဟွံသေင် ဖျေံလ၀်ကုဪဗီု။ အမာတ်မန်ဗညာဒလဟေင်ရ။
ပဦုညးဂမႜိုင် ပႛဲကာလလညာတ်ဟွံတုပ် ပႛဲကာလမံင်ညးသ္ကအ်မွဲစွံဟွံဂွံ နဲကဲသောင်ကလး နွံမံင်ဗ၀်သအ၀်ရ။ နဲဓဗတ်ညးသ္ကအ်သၞးနွံဟွံသေင်။ နဲဓဗတ်ညးသ္ကအ်ဂှ် ဒ်ှနဲကရၜစးညးသ္ကအ် တဲု ဒးစွံလက်ကရၜအိုတ်ရ။ နဲသ္ဂောံအာညးသ္ကအ်မွဲစွံဂွံဂ်ှဟေင် ဒးစကာကႜာရ။ ဗီုပဦုတႝာန် မံင်ညးသ္ကအ်လၞုဟ် ကႛိုပ်သ္ကိုပ်ပဦုတမႜာတေံလေ၀် ကေင်တႝာန်ကႜုင်ကီုရ။ ကာလတႝာန်ကႜုင် ညးတံသောင်ကလးမာန် ညးတံကွာ်ကႜုင်မွဲဍာန်ဓ၀် နန်ထ၀်လေ၀် ဟွံကေႜံကႜက် ဂကူလေ၀် ဟွံဒ်ှကႜုင်ဍိက်ပႜက်ရ။ ကာလညးတံမတ်ဂႜု အာမွဲစွံဟွံဂွံကႜုင် ဍုင်လေ၀်ဒးဂႜုဓီု ဂကူလေ၀် ဒးလီုလ်ာရ။
ဇၞာပ်မဆုဪပၝံက် ပံက်ဗ်ှဝင်အိုတ်ညိ။ မုဒ်ှဒှ် ပြးကုဪကောံ ဒးရဲုမ္ဂး ရဲုကောံညိ။ ဖေက်ကုဪဂံင် ဒးရဲုမ္ဂး ရဲုဂံင်ညိ။္ဘိုဟ်ကုဪဂမ္တၜ ဒးရဲုမ္ဂး ရ္ဘဲုိုဟ်ညိ။ ဂႜုကုဪတၞး ဒးရဲုမ္ဂး ရဲုတၞးညိ။ လွဟ်ကုဪကႛဟ် ဒးရဲုမ္ဂး ရဲုကႛဟ်ညိ။ သႝကုဪမိတ် ဒးရဲုမ္ဂး ရဲုမိတ်ညိ။ ဆာန်ကုဪဍုဟ် ဒးရဲုမ္ဂး ရဲုဆာန်ညိ။ ဗၞာကုဪမန် ဒးရဲုမ္ဂး ရဲုမန်ညိ။ ဆဂးဂှ် မွဲဗလးလေ၀် ဟွံဂွံတက်ကုဪဗၞာတံဏီ ဂွံဏာဇျာံ ဒ်ှအာဗိုလ်လအ် လ္ပကုဪဒှ်။
အခိင်ဏံ ဗၞာတံဂှ် ဒ်ှအာကႛိုပ်ဖာဂႜိုင် ပဦုဂှ် ဒ်ှအာကႛိုပ်ဖာအောန်ရ။ အခိင်ပဦုဒ်ှကႛိုပ်ဖာအောန် ပဦုဒးစကာကႛဟ် ဂႜိုင်နူကုဪလွဟ်ဏီ။ လွဟ်ဂှ် ဗလးထောံဟွံဂွံမ္ဂး ပႛဲလွဟ်ဂှ် ပဦုဒးဗ္ဂပ်စုတ်ကႛဟ် ဟေင်ရောင်။ လၞုဟ် ဗၞာတံ စကာလွဟ်မႝိဟ်ဂှ် ဂႜိုင်နူကုဪလွဟ်ပႝာန်ဏီ။ ပႝာန်ဗၞာတံကြက်မ ကႜုင်စိုပ်ဂတတေံဂှ် ဗီုပဦုတော်လ၀်ဂှ် ကာလဍေံဒ်ှမှဒှ် ပၝံက်ဂတတေံ မုကသပ်ဍေံနွံ ညးဂ်ှတီရော။ ပႛဲလိက်လလောင်တရးဒမႜုက်ဍေံတံဂှ် ညံင်ညးဗြၜကောန်ဍုင်အရင်ဂမႜိုင်သ္ဂောံ ထေင်ဇေႝာ်ကုဪညးတြုံဗၞာတံဂှ် ဍေံကေႜာန်ဏောင်၊ ဇၞာပ်ဒေသကောန်ဍုင်အရင်တံမတန်တၜမံင် ဂှ် ညံင်ဂကူဗၞာတံသ္ဂောံလုပ်ဂွံဂှ် ဍေံစှဇန်ဏောင်၊ တၞံဌာန်ဍေံတံမစိုပ်ဂှ် ညံင်ဆီဂကူဗၞာသ္ဂောံ သှေ်မံင် ပႛဲညးဗြၜကောန်ဍုင်အရင်တံဂှ် ဖျေံဂွန်ဏောင်၊ ဂကူဗၞာမစှေ်ဒႝဲာကုဪကောန်ဍုင်အရင် တံဂှ် ယ၀်သတီကောန်ဇကုဖာဒ်ှဗၞာဟွံမွဲမ္ဂး ဒးပြံင်တိုန်ဒေသဗၞာဂႜိုင်တံဂ်ှဏောင်၊ ညးဒုင်ကာ သၞိင်တံဂှ် ယ၀်သမိက်သ္ဂောံဂွံကမေႜာန်ပႛဲဍုင်မ္ဂး ညံင်သ္ဂောံထပ်တဲကုဪ၀ုတ်ကောန်ဍုင်အရင်မွဲဂှ် ဒးဂစာန်ဏောင်၊ ဗၞာညးမစှေ်ဒႝဲာကုဪကောန်ဍုင်အရင်တံဂှ် သြန်အထံက်ပင်နူကုဪအလုဪသှ လေ၀် ကလိဂွံမာန်မံင်ဏောင် ဂးလ၀်ရ။ အရေ၀်ဏံ ဒ်ှဟွံဒှ် မိက်သ္ဂောံတီ အာလ္ဂုင် ညံင်ဂွံစိုပ်(အလုံ သစ်တောအိမ်ရာ)တေံညိ။ ဗြၜကချေင်ကရေင်မန်…ဂကူပဦုဟွံတီတံဂ်ှလေ၀် နွံမံင်ဗ၀်သအ၀်ဏီ စှေ်မံင်ဒႝဲာကုဪဗၞာ။
အဃောအဲမံင်မံင် ပႛဲလ္ဂုင်တေံ အဲကွာ်မံင်ဂႜံင်ပါန်သ၀်တာန်လၞိုန်။ အဲဂှ် ၀ါသႝာဗ်ှလိက် တြေံတြဟ်နွံမံင်။ ဗွဲမဂႜိုင်တှေ် ဂွံရာန်ဂှ် သြန်ဟွံမွဲ၊ လိက်ဂှ် ခိုဟ်မံင်ဏောင် ထေင်တှေ် ဂ္ဇံဗ်ှထောံဒႝဲာဂှ် ဒတဲုရ။ မွဲဝါဂှ် အဲဆုဪဗိုလ်ပႝာန်ဗၞာမွဲ။ ဍေံလေ၀် ရဲုမံင်လိက်ကီု။ တဲု..အဲဂွံဆုဪဍေံရဲုဏာလိက်ပရောသႛိုက်ဆာန်ကုဪပႝာန်ရ။ ဟ…ဒ်ှကောန်ပႝာန်လေ၀် ဗ်ှပရူဆာန် ဂ်ှရဟာ အဲသၞာန်။ ပဦုစိုပ်အာဒေသဒုဪမုက်ပႝာန်တံဂ်ှတှေ် ဆာန်လေ၀် ပႝာန်မွဲသ်ာကီုရ ဍေံဟီု။ ႚပႝာန်ဏံမှ ပႝာန်ဇေႝာ်ဇေႝာ်ရ မန်တံ။ မုပဦုပမံင်ရော။ ဒ်ှသႝညးသ္ကအ်ဂတာပ်မံင်ဏီဟာ။ ကယျာန်မံင်ပဵပုင်ဂတာပ်မံင်ဏီဟာ။
ယွံညးမဗ်ှလိက်တံ အခိင်ဒ်ှမံင်စာင် ပႛဲခရိုင်ဏံ ဝေင်လ္ပပြိုင်ဝေင်ဂႝဲ ဝေင်လ္ပပြိုင်ဝေင်ဂရ်ှညး သ္ကအ်စိုအ်။ သႝကႜုင်လံက်ဂြိင်တဲုဇုဪဂှ် ဒၞာနူဒိုဟ်ဓီု ဒးလီုလ်ာဂှ် မွဲဗီု၊ ယ၀်သဇကုကုဪဇကုရ လံက်ဂြိင်ကေတ်ဇုဪကေတ်လီုကေတ်မ္ဂး လ္တူဒိုဟ်ဂ်ှဝိုဟ် လ္တူဓီုဂ်ှဓဲုရဏး။ ချပ်ရံင်အိုတ်ညိ။ မွဲပၝံက်တှေ် ပံက်မွဲ။ မွဲပၝံက်မ္ဂး ဒးဏာကုဪဍေံမွဲ။ ဂကူပဦု ဂလိုင်လုဪမသှေ်ဏီရော။ သှေ်မံင်ကုဪညိဏံ ဒ်ှအာညးထံင်ပရိုင်ဗၞာညိ ဂစိုတ်ထောံညးသ္ကအ်ညိ ဗီုလုဪဂွံအာရော။ ညးဏံသ၀်ရ ညးဏံသႜုင်ရ ညးဏံဗုရ ညးဏံလ္စံက်ရ လ္ပဂႜဲာဂးရ ခိုဟ်ဟာဟွံတီ။
ယွံညးမဆာန်ဂကူတံ…မုပဦုဒးသ္ပကုဪနဲာတံရော…ဒးကြာတ်ကုဪဇိုင်ဟာ၊ ဒးဇိုတ်ကုဪဒႝပ်ဟာ၊ ဒး ပတ်ပေါန်ကေႜာန်ကုဪဝေယျာဝစ္စဟာ။္ဘိုတ်ဏံဆာန်မံင်ဂကူမန် ဍုဟ်မံင်ဗၞာရတှေ် စၜစိုပ်တိပႜန်ဂတးတေံအိုတ်စိုအ်။ ကေႜာန်ဂံင်ဂံင်ဍုဟ်ဖဲဖဲ ညးမွဲဟွံဒးဗျိပျုတ်စုတ်စေဲာဒုဟ်ညး သ္ကအ်ရ။ အေ…အလုဪဇကုလေ၀် ယ၀်သစၜကေႜာန်ဟွံမာန်မ္ဂး ညးမွဲ လွဟ်မွဲဇကိုဟ် မွဲဂိတု သြန်ဒ၀်ဠာ (၅၀)ထကေ၀် ထံက်ပင်ကုဪရဲပႜန်ဂတးမာန်ဟာ။
ဗီုဂ်ှလေ၀် ဟွံသေင်တှေ် ပဦုချိုတ်တဲုမုဒ်ှဒှ် ကႜာလမျီုပဦုဟွံဂွံအိုတ် မတ်ပဦုဟွံဂွံပႜိုတ်ဏီ ဂကူမန် ကောန်ဇာတ်ပဦုတံဏံ ညံင်ဟွံဂွံကႜဲာအာဂကူတႝဟ် ဂတမုက်ပဦုတံဏံတှေ် ကေတ်ရဂးတဲု ညံင်ဟွံဂွံဒ်ှအာမပ္တံ မ်ာက၀်။ ခြေဿတ၀်ဖာ၊ ရေတ်ချာတ်ဂှ် ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ပဦုမင်မွဲအာတုပ်တုပ်အိုတ်စိုအ်။
ဆဂး သီုဖအိုတ်သမ္တီလ၀်…ညးမဆာန်ဂကူဟီုဂှ် နူဍောတ်ဍောတ်တေံလေ၀် ဆာန်ကႜုင်ဂကူ ရ၊ လၞုဟ်လေ၀် ဆာန်ဂကူရ။ အာဂတနူဏံလေ၀် ဆာန်ဂကူရ။ ဒုဪကုဪချိုတ် ဆာန်မံင်ဂကူ လၞိုန်ရ။ ဒၞာနူဝါသႝာနွံသက်သက်၊ ဒၞာနူမံင်ပႛဲကွာန်ဟွံဂွံသက်သက်၊ ဒၞာနူပရေင်ပိုန်ဂြပ်လီု သက်သက်၊ ဒၞာနူသႝတံဍုဪဍိုက်သက်သက်၊ ဒၞာနူဍုဟ်သႝသက်သက်၊ ဒၞာနူမိက်သ္ဂောံဒက်ဝဲ သက်သက်၊ ဒၞာနူတဟင်ဆီသက်သက်၊ ဒၞာနူညးတႝဟ်ဖအၜသက်သက်၊ ဒၞာနူဍ်ာတိုန်သက် သက် ယိုတ်တိုန်မွဲအရိုက် ကေႜာန်မံင်ပရေင်ဂကူဟွံသေင်။
ဍုင်ဇကု ဂြပ်ဇကု အဲာကၞဲာဇကု ဂုဏ်စရဲာဇကု သိက္ခာဇကု ဒၞံင်ဇကု ဌာန်တုက်သုက်ဇကုတံဂှ် ဇကုရမထေက်ကုဪပိုင်ပြှ ဇကုရမထေက်ကုဪဖန်ဖက် ဇကုရမထေက်ကုဪအုပ်ဓုပ် ဇကုရမ ထေက်ကုဪဂွံအ၀ုဪ ဇကုရမထေက်ကုဪမင်မွဲဓ၀် ဂြပ်ဇကုအပိုင်ဂှ် ဒးကလေင်ကေတ်ဟေင်ရောင် ကႜိုဟ်ခႜင်ကေတ်တဲု သတ်မွဲဓမ္မတာမွဲ အတိုင်ကုသဪုကံကႜုင်ဒ်ှမႝိဟ် အတိုင်ကံကုသုဪဇကုမဆန်္ဘန်လ၀်နူအတိက်တေံ မိက်သ္ဂောံဖန်ဖက်ကေတ်ဘ၀ဇကု ကံကုသဪုဇကုဝွံ ညးလုဪမွဲလေ၀် လုပ်ပထဲုဟွံဂွံ ညးလုဪမွဲလေ၀် လုပ်ဖန်စႝးဟွံဂွံ စှေ်စးမံင်ကုဪဓ၀်ကျာ်၊ စိုပ်လက်ထက် ကျာ်တြဲအရိယမေတ္တေယျမ္ဂး ဂကူမန်တံဏံရ သ္ဂောံဂ္ဇံက်ကႛိုင်ကျာ်လ္ဂုင်ပႜန် ဂကူမန်တံဏံရ သ္ဂောံသႜိုင်ဓာတ်သော်ကျာ်မသေၞဟ်မွဲတႝုင်ပႜန် သ္ဇိုင်ဝန်မြၜသ်ာဝွံ ယုဪဒုင်ကေတ်တဲု ကေႜာန်မံင် ပရေင်ဂကူ ချှဒရာင်မံင်ပရေင်ဍုင်ကွာန်ရောင်။ ဆလံဟွံဂွံဍုင်ဏီ ဆလံဟွံဂွံစၜစိုပ် ဍုင်္ဘိုပ်ဟံသာဏီ ဆလံသၞိင်မန်ဟွံဂွံပတိုန်ကႛိုင်ကျာ်လ္ဂုင်ဏီ ညံင်သ္ဂောံဒေါအ်ဇူအာ နူဗွိုင်ပရေင်ဍုင်ကွာန်ဂှ် မုရၜညးလုဪမွဲ မုရၜဟိုတ်နူဟိုတ်လုဪမွဲ စုဪဒႝာဟွံထေက်။ ပွမကုဪကသပ်ကုဪ ဒေါအ်ဇူမ္ဂးဂှ် သႝတံဟေင် ရာဒႝာမိက်ရ။ သၞာပရေင်ဍုင်ကွာန်ဍာံမ္ဂး ဆလံဟွံဒးဒေါအ်ဇူ၊ ဂံင်ကေႜာန်လ္ဒောဝ်၀ိုင် ဂံင်ပလေ၀်လ္ဒောဝ်၀ိုင် ဂံင်ချိုတ်လ္ဒောဝ်၀ိုင်ဂ်ှဟေင် နွံကုဪအဓိပ္ပဵရ။ မုကဆံင်စိုပ်စိုပ် ယ၀်သဆာန်ဂကူဍာံမ္ဂး ဒးကလေင်ခိုဟ်ညးသ္ကအ်မာန်ဏောင်။ ဒးကလေင် အာမွဲစွံမာန်ဏောင်။ ညးမွဲကုဪမွဲ ဆလံဟွံတရၜစးညးသ္ကအ်ပုဟ်။ နူဘ၀ကောန်႞ာ်တေံ ချူလိက်ဗေႜတ်မ္ဂး ညံင်ရၜမဒးဇိုတ်ထောံဂတုဪတၞံကီု ညးမွဲကေုာံညးမွဲ အာဟွံဂွံမ္ဂး ဇိုတ်ထောံတဲု ကလေင်ချူတၞိပႜန်ထေက်ရ။ စိုတ်ဓာတ်မဒုင်ပၛှပၛပ်ဝွံဟေင် ဒ်ှစိုတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူ မဍာံပြမွဲရ။
ကှေ်…ရဲတံ တေတေံ မွဲပၝံက်ပႜန် မွဲလ္ပထောံ ကုဪဒ်ှမွဲစွံညိဏး။ ညှမ္ဂးသာ အာမ္ဂးစိုပ် ကေတ်မ္ဂးဂွံ ဂးသ်ာဂှ်သေင်ဟာ။ သတ္တိနွံဍာံတှေ် ဒးဂံင်ညှ၊ ဒးဂံင်အာ၊ ဒးဂံင်ကေတ်ဏောင်ဟွံသေင်ဟာ။ သႝတံသ္ဂောံဖေက် ထ႟းဆီညှသၞဟ်အိုတ်ညိ၊ ပဦုညှအိုတ်စိုအ်၊ ပဦုအာတုပ်တုပ်အိုတ်စိုအ်၊ ပဦုကေတ်ဍုင်မန်အိုတ်စိုအ်…။
Posted by မတ်သာင် at 5:20 PM No comments:
မြန်မာပြည်ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီမှ အဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့် စပ်ဖများအားလုံးတို့အပြင် ရှမ်းပြည် နယ်များ၊ ကချင်တောင်တန်းဒေသများနှင့် ချင်းတောင်တန်းဒေသတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များတို့ တက်ရောက်ကြသော ပင်လုံမြို့တွင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးကြီးတရပ်တွင် ...
ကြားဖြတ်မြန်မာအစိုးရနှင့် ချက်ချင်းပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့် ရှမ်း၊ ကချင်နှင့် ချင်းတို့သည်
လွတ်လပ်ရေးကို ပိုမို၍ လျှင်မြန်စွာ ရရှိလိမ့်မည်ဟု အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အဖွဲ့ဝင်
တို့သည် ကန့်ကွက်သူမရှိဘဲ အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူညီကြလေသည်။
၁။ တောင်တန်းသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (တစညဖ) ၏ ကြိုးကိုင်အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်
များ၏ ထောက်ခံချက်အရ တောင်တန်းသားများ၏ ကိုယ်စားလှယ်တဦးကို ဘုရင်ခံကရွေးချယ်၍ နယ်စပ်ဒေသများကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဘုရင်ခံ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ခန့်ထားရမည်။
၂။ ဤအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် ဌာနလက်ကိုင်မရှိ ကောင်စီဝင်
တဦးအဖြစ်ခန့်ထား၍ ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြည်ပကိစ္စရပ်များတွင် ထုံးနည်းဥပဒေအရ အမှုဆောင် ကောင်စီ၏ အာဏာလက်အောက်သို့ ရောက်ရှိသည့်နည်းတူ နယ်စပ်ဒေသကိစ္စများကိုလည်း အမှုဆောင်ကောင်စီ၏ အာဏာအောက်သို့ ရောက်ရှိစေရမည်။ ဤနည်းလမ်းများအတိုင်း နယ်စပ် ဒေသဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာကို ပေးအပ်ရမည်။
၃။ အဆိုပါ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ၎င်းနှင့် လူမျိုးချင်းမတူသော ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံနှစ်ဦးက ကူညီ
စေရမည်။ ရှေးဦးစွာ ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့သည် ၎င်းတို့အသီးသီး သက်ဆိုင်သည့်
နယ်များ၏ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်၍ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှာ အခြား နယ်စပ်ဒေသ
အားလုံးတို့၏ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်စေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ထုံးနည်းဥပဒေအရ တွဲဖက်တာဝန်ယူရသည့်မူအတိုင်း ရွက်ဆောင်စေရမည်။
၄။ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် အဖွဲ့ဝင်လူကြီးအနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသ
များ၏ တဦးတည်းသော ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် နယ်စပ်ဒေသများနှင့် သက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးကြသည့်အခါ အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် တက်ရောက်နိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။
၅။ အထက်တွင် သဘောတူညီသည့်အတိုင်း ဘုရင်ခံ၏အမှုဆောင်ကောင်စီကို တိုးချဲ့မည်
ဖြ စ်သော်လည်း နယ်စပ်ဒေသများ၏ နယ်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတွင် ယခုခံစားနေရသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကို မည်သည့် နည်းနှင့်မဆို တစုံတရာလက်လွတ်စေရန် အဆိုပါကောင်စီက ပြုလုပ်ခြင်းမရှိစေရ။ နယ်စပ်ဒေသများ အတွက် နယ်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ရာခိုင်နှုန်းအပြည့် ရှိစေရမည်ဟူသောမူကို သဘောတူညီကြသည်။
၆။ ပူးပေါင်းထားပြီးသည့် မြန်မာပြည်အတွင်း သီးသန့် ကချင်ပြည်နယ်တခု နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်
၍ တည်ထောင်ရန် ပြဿနာမှာ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သော်လည်း
ဤကဲ့သို့ သီးခြားပြည်နယ်တခု ထားရှိသင့်ကြောင်းကို သဘောတူညီကြသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်
အထ မြောက်ရန်အလို့ငှာ ပထမခြေလှမ်းအနေဖြင့် ၁၉၃၅ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အက်ဥပဒေအရ နောက်ဆက်တွဲစာရင်းပါ အပိုင်း (၂) ဒေသများကဲ့သို့ မြစ်ကြီးနားနှင့်
ဗန်းမော်ခရိုင်တို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် နယ်စပ်ဒေသ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံ
၇။ နယ်စပ်ဒေသများ၏ နယ်သူနယ်သားတို့သည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင် အခြေခံများအဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုထားသော အခွင့်အရေးများတို့ကို ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။
၈။ ဤစာချုပ်တွင် သဘောတူကြသည့် အစီအစဉ်မှာ ပဒေသရာဇ် ရှမ်းပြည်နယ် နယ်မြေစုတွင် ယခု အပ်နှင်းထားပြီးသော ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန်။
၉။ ဤစာချုပ်တွင် သဘောတူညီကြသည့်အစီအစဉ်မှာ မြန်မာပြည် အခွန်တော်ငွေများမှ ကချင် တောင်တန်းနယ်များနှင့် ချင်းတောင်တန်းနယ်များက ရသင့်ရထိုက်သော ဘဏ္ဍာရေးအကူ
အညီကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရ၊ မြန်မာပြည်နှင့် ပဒေသရာဇ် ရှမ်းပြည်နယ်မြေစု၏ ဘဏ္ဍာရေး
အစီအစဉ်များကဲ့သို့ ကချင်တောင်တန်းနှင့် ချင်းတောင်တန်းများအတွက် အလားတူအစီအစဉ်များကို ထားရှိကျင့်သုံးရန် ဖြစ်နိုင်မည်၊ မဖြစ်နိုင်မည်ကို ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီက နယ်စပ်ဒေသများ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်အတူ စစ်ဆေးကြည့်ရှုရမည်။
အိုင်တီအက်(စ်)အမ်၊ ဖလမ်း။ (ပုံ)
အေတီအမ်၊ တီးတိန်။ (ပုံ)
သထုံစပ်ဖလုံ၏ ကိုယ်စားလှယ် (ပုံ)
Posted by မတ်သာင် at 5:05 PM 1 comment:
ဍရံင်အာ ၂၀၁၀ လ္ပ်ာတေံ
ပေဵရဲုစ်ှမဲာ ၁၉၉၀ တဲုခြာဟွံလံ ကောလာဟလမွဲတိတ်ကႜုင် အလုဪသှပႝာန်န၀တတံ ဟွံအပ်အ၀ဪုကုဗော်ဇႝးမဲာမွဲသာ် ဆက်ရပ်အာအ၀ုဪ ဒုဪကုဪပေင်္ဘါစှော်သႝာံဏောင်ဂး။ အခိင်ဂှ် န၀တတံ ဆက်ကေမ်ဇျာပ်အာအ၀ုဪ ဒုဪကုဪပေင်္ဘါစှော်သႝာံပႜန်ဏောင် ညးမွဲဟွံထေင်လ၀်။ အခိင်ဂှ် ကောန်ဗော်ဒှမ၀်ကရေသှကောန်ဂကူမန်လၝုဪ ကုဪသတိကီုလေ၀် ညးစိုတ်လုပ်စဟွံမွဲ။
ပႛဲသက္ကရာဇ်္ဘါလၝီသႝာံ ဂါမ်လုပ်ကႜုင်ဂှ် ကောလာဟလတိတ်ကႜုင်မွဲပႜန်။ သွက်သ္ဂောံသအးကေႜံဗော်ဒှမ၀်ကရေသှကောန်ဂကူကီု၊ သွက်သ္ဂောံလုပ်တေၝတ်ဗော်ဒေါအ်ပန်ပှော်ကောန်ဍုင်အရင်ဂမႜိုင်ကီု၊ အလုဪသှပႝာန်မသီလ၀်အ၀ုဪ နနဲဟဗဗွဲဓရ်ဂှ် သွက်သ္ဂောံဒ်ှဒတန် ဗွဲမဗဗွဲကုဪသေႝာဝ်ဓရ်ကီု ကေတ်အခိင်စ်ှသႝာံတဲု ပလေ၀်ပလေတ်စဏောင်။ ပတံနူ ၂၀၁၀တဲု စုဪကုဪစိုပ် ၂၀၄၀ သႝာံတေံ ပွိုင်ပိစှော်သႝာံ ပႛဲကၞိန်ဍုင်ဗၞာဝွံ ဂကူဗၞာမွဲဟေင် သ္ဂောံနွံကုဪအ၀ုဪတဲု ဂကူကောန်ဍုင်အရင်ဂမႜိုင်အိုဿီု မ္ဒးကေႜံကႜက်အာနူဗီုတိဗၞာဏောင်။
ပႛဲသႝာံ ၂၀၀၂ တေံ အတိုင်ပရိုင်မတိတ်ကႜုင် နူအကြာညးမလုက်စုက်ကုဪဌာန၀န်ဇေႝာ်ဂမႜိုင်မ္ဂး နဲသ္ဂောံ႞ိတ်ကမႜက်ဂကူကောန်ဍုင်အရင်ဂမႜိုင်ကီု၊ နဲသ္ဂောံသအးဇၝးကေႜံဘာသာတႝဟ်သအာင်ဂမႜိုင်ကီု ဖျေံလ၀်မူချူလ၀်အပြောံတဲုဒ်ှအိုတ်တြ ပရိုင်အပႛဲမ္ဂးလ၀်ရ။
ပေႝာဝ်မူမဖျေံလ၀်ဂမႜိုင်ဂှ် ယ၀်သမ္ဒးဓမံက်ထ႟းမွ္ဘဲါတင်မ္ဂး ညးဟွံအံင်လိက်ဗၞာစ်ှတန်မ္ဂး ညံင်ဟွံဂွံဂႜဲာကမေႜာန်ဂွံကီု၊ သင်ဟွံဂွံလ၀်တဆိပ်နူတက္ကသိုလ်ဗၞာမွဲမွဲသ်ာမ္ဂး ညံင်ဟွံဂွံဂ္ဇံဘာဂွံကီု ဖျေံဖျန်လ၀်နွံမံင်ရောင်သ္ဂးရ။ ပရေင်ဍုင်ကွာန်၊ ပရေင်ပႝာန်၊ ပရေင်ပိုန်ဒြပ်တံဂှ် မ္ဒးနွံပႛဲတဲဗၞာတံတဲု သွက်ကောန်ဍုင်အရင်တံဂှ် ဆ္ဘိုတ်ပရေင်ပိုန်ဒြပ်ဟေင် မဂွံအာတ်အခေါင်ကေႜာန်နူဗၞာတံရ။
ကောလာဟလဂမႜိုင်ဏံဂှ် တိတ်ကႜုင်မံင်နူဒ္စာံသႝာံစ်ှသႝာံတေံရ။ ဒ်ှမာန်ဟွံမာန် ချပ်ကေတ်ညိ။ လၞုဟ် သေႝာဝ်ဍုင်လေ၀် ဍေံတံ ချူဓဇက်လ၀်တဲုယျ။ ဗ်ှရံင်နူတမ်စိုပ်ကေႝာတ်ညိ။ တဲု…ဗ္ကိတ်စမ်ရံင်ကုဪပရိုင်ကောလာဟလလ္တူတေံညိ။
အတိုင်ကောလာဟလလ္တူတေံ ယ၀်သဒ်ှဍာံမ္ဂး ဂကူကောန်ဍုင်အရင်တႝဟ် လ္ပဟီုဏီ၊ ဂကူမန်ပဦု ပႛဲသၞ၀်ဥပဒေဏံ ယ၀်သဒးမံင်အာ ပွိုင်ပိစှော်သႝာံမ္ဂး မုဒ်ှအာမာန် ဗ္စာရဏာရံင်ညိ။ သီုစ်ှပွိုင်ဍုင် ပရေင်အုပ်ဓုပ်ဗၞာတံ စိန်ဝုန်ကႜုင်မာန်ဏောင်။ ဂကူမန်ပဦုတံဂှ် ကဆံင်သ၀်အာနူကုဪဂကူဗၞာတံဏောင်။ ဂကူမန်တံဂှ် ၀ိဝိင်အာ ပႛဲမပ္တံဂဥဲုဝိ၀ိင်တံဂ်ှမာန်ဏောင်။ ဂႜံင်တံဂှ် ဍေံတံဖံက်ဏောင်။ ဇၞာပ်ဒေသ ဂကူဗၞာတံစိုပ်ကႜုင်ဏောင်။ ပႛဲဒေသမန်မဂႜိုင်ဂှ် ဍေံပတန်ရုင်စက်ဏောင်။ ဂကူဗၞာတံဂှ် အုပ်ဓုပ်ဂကူမန်တံဂ်ှဏောင်။ ကဆံင်ဘ၀ဇကုသ္ဂောံလှုင် ဒးရုန်ဂစာန်တဲု လ္ပ်ာဂကူဂှ် ၀ိုတ်တႜိင်အာမာန်ဏောင်။ ဒုင်သ္ဇိုင်ကုဪဂကောံကျဖောအ်တဲု ဍေံတံဇမႜိင်ပတိတ်ဝါဒဂကူဗၞာတဲု ပြ၀မနှၜဆီ႞ိတ်ကမႜက်ဂကူဂှ် က္တုဪဒ်ှကႜုင်ဏောင်။
ကွာန်မန် မန်ကႜးကႜးမံင် အိုတ်အာဏောင်။ မန်ဟီုကႜုင်အရေ၀်ဗၞာ၊ မန်နှၜကႜုင်ကုဪဗၞာ၊ မန်ဟွံတီမန်တံဂှ် ထေင်သေဲာကႜုင်ကုဪမန်သၞာပရေင်ဍုင်ကွာန်ဂမႜိုင်တဲု မန်ဆာန်ဂကူတံဂ်ှလေ၀် ဓရ်သေႜဟ်ပၞာလ္တူမန်က၀က်က၀ဲုတံဂှ် ဂႜိုင်တိုန်ဏောင်။ ၀ါဒလံက်ဂြိင်တဲုဗဇုဪ ဟိုတ်ဖုဪဗီုဏံ က္တုဪဒ်ှကႜုင်တဲု ဂကူမန် မဒစုဪဒစးညးသ္ကံဂႜိုင်တိုန်တဲု ဇြဟတ်မစှေ်စးကုဪဗၞာတံဂှ် အောန်စှေ်ကႜုင်ဏောင်။ ဂကူမန်မထိင်ဒက်မင်မွဲလိက်ပတ်ဂှ် နွံဆ္ဘိုတ်ဓမ္မတာဏောင်။ ဂကူမန်မထေင်ဇေႝာ်ကုဪဗၞာ မဒုင်သြဇာဗၞာတံဂှ် ဂႜိုင်တိုန်ဏောင်။ ကွာန်မန်ဗီုကုဪကွာန်ကၞာဝက်တံဂှ် ဒ်ှအာဗီုဍုင်မုဟ်ဍုင်၊ ဍုင်မုဟ်ဍုင်ဂှ် ဒ်ှအာဗီုဍုင်မတ်မလီု၊ ဍုင်မတ်မလီုဂှ် ဒ်ှအာဗီုဍုင်ဗ္ဂော၊ ဍုင်ဗ္ဂောဂှ် ဒ်ှအာဗီုဍုင်အ၀ဏောင်။ ပွိုင်ပိစှော်သႝာံ လက်သဏ်ဂကူမန် ညံင်ဂွံနှၜအာကုဪဂကူဗၞာဂှ် မန်ကုဪဗၞာတုပ်တုပ်ရ ဍေံဟွံဒးဟီု မန်ပဦုရ ဣဟီုစႝးဍေံ ဒ်ှကႜုင်သ်ာဏံဏောင်။
ပရေင်ဍုင်ကွာန်လိုက်လေ၀် ဟွံညိင်ဝတ်၊ ပရေင်ပိုန်ဒြပ်ဂႜးတိလေ၀် ဃရိုက်ဃရာင်၊ ပႛဲဍုင်သေံလေ၀် ယ၀်သ၀ါဒႚကရာဇ်ကျဗြမ်အာမ္ဂး မုမန်သ္ဇက်ဂွံဟွံမွဲရ။ ခေတ်ဖကာံတေံ ဇွိတ်လ၀်စးမန်တဲု ဗၞာတံ ႞ိတ်ထောံဂကူပျူတံတဲုရ။ အခိင်ဏံ ဗၞာတံဇွိတ်ဂွံစးသေံတံမ္ဂး မန်ဒ်ှပျူမာန်ရ။ စွံသ္တိအိုတ်ညိ။
တဲုပႜန် ယ၀်သစိုပ် ၂၀၄၈ မ္ဂး ကၞိန်ဍုင်ဗၞာ ဗႜး္ဘးကႜုင်နူသၞ၀်တဲအင်္ဂလိက် ပေင်ကႜံသႝာံယျဂ်ှလေ၀် လ္ပ၀ိုတ်စညိ။ ခေတ်ဖကာံတေံ က္လေင်ရံင်။ ဗၞာတံစကာလိက်မန်ပႛဲဝင်နန် ဗႝတ်ကႜံ္ဘါစှော်သႝာံတဲု စႝးလိက်မန်ဂှ် ဍေံတံစုတ်ထောံလိက်ဗၞာရ။ ခေတ်ဗ္ဂော ဖရင်နံင်အံင်ဇႝးမန် ချူလိက်မန် ကေတ်အခိုက်မန်တဲု လက်ကရၜဏံ ဗႝတ်မွဲကႜံသႝာံပႜန် အံင်ဇဲယျ စံင်ထောံလိက်မန်ဍုင်မန်ဂကူမန်ရ။
ယ၀်သရံင်ကုဪအခိုက်ဗၞာမ္ဂး ဗီုဍေံတံကေတ်ကႜုင်ဇႝးမန်ဂှ် တုပ်ကႜုင်ရ။ ပွိုင်ပိစှော်သႝာံကႜာဂှ် ဍေံတံလှေံဍေံတံဘဏောင်၊ ပွိုင်ပိစှော်သႝာံလ္ဒောဝ်ဂှ် ဍေံတံပထဲုဏောင်၊ ပွိုင်ပိစှော်သႝာံလအိတ်ဂှ် ဍေံတံသအးဏောင်။ ခေတ်လၞုဟ်ဏံလေ၀် တန်ဒ်ှသာ်ဂ်ှပႜန်ဏောင်။
ဟိုတ်ဂ်ှရ ပႛဲသႝာံ ၂၀၁၀ ဏံ ပေဵရုင်စ်ှမဲာဍေံတံတဲုဒ်ှအာမ္ဂး ပွိုင်ပိစှော်သႝာံဂတတေံဂှ် ဒးဂွိင်ကွေံကွေံဏောင်။ ဂကူမန်ပဦု ယ၀်သသ္တိဗႜးတှေ် ဂကူကေႜံကႜက်အာမာန်ဏောင်။
အတိုင်ကောလာဟလ ခယျလ၀်လ္တူတေံ ယ၀်သဒ်ှဍာံမ္ဂး ဗီုလုဪဂကူမန်ပဦု သ္ဂောံစဪုဒႝာမင်မွဲဗ္ဂုဪလဟုဪပတိုန်ဂကူဘာသာသာသႝာညိရော….။
အတိုင်ပရေင်ဍုင်ကွာန်ပက္ကတိလၞုဟ်ဏံ ထိင်ဒက်မင်မွဲအာတဲု ညံင်သ္ဂောံကိတ်ညှကုဪခေတ် ဒးပြံင်လှဲာနဲကဲ လ္ပကုဪလ္ဇဲု၊ ဥပဒေသႝဂှ် ဇၞာပ်မန် ကုဪလၝတ်လ၀်ပေင်ပေင်ညိ။ မွဲအသိင်ဓ၀် သေႝာဝ်ဥပဒေဂကူမန်ဂ်ှလေ၀်္ဘိုတ်စကာဂွံ စကာညိ။
ဂကူမန် ညံင်သ္ဂောံတီမန်၊္ဘိုန်ရဒးမံင်အကြာညးဂမႜိုင်လေ၀် ညံင်ဟဂွံဝိုတ်တႜိင်အာမန်၊ အခိင်ကာလဆီမ္ဒးနှၜအာမ္ဂး ကောန်ဇာတ်ဇကုညံင်သ္ဂောံဒုင်ယၞုမန်၊ ညံင်သ္ဂောံလေပ်အရေ၀်မန်လိက်မန် ဒးကေၞာန်ဏောင်။
ပဵနူကွေတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဂှ် အခိုက်ကႝာမန်မပ္တံယူကႝာ မဒ်ှစႝးတေႝာဝ်ဒတောဝ်ပဦုဂမႜိုင်ဂှ် က္လေင်ဓမံက်ပတိုန်တဲု ဇၞာပ်မန် ကေတ်ယၞုတေႝာဝ် မန်ဒိုင် မည မန်တ ဗွဲမဗဗွဲကုဪကဠော်ဇကုညိ။ (ဥပမာ- မာံထ၀်ပိုန် မည၊ မာံထ၀်ပိုန် မန်တ၊ မာံထ၀်ပိုန် မန်ဒိုင်)
ဘာပရေင်ပညာပုဂ္ဂလိကမဒုင်သ္ဇိုင်ကုဪပရေင်ပိုန်ဂြပ်တံဂှ် သ္ဒးနွံပႛဲတဲဂကူမန်တံဂႜိုင်ဂႜိုင်တဲု ညံင်သ္ဂောံဍစိုပ်တက္ကသိုလ်လိုက်ဂမႜိုင် ဒးဂစာန်ဏောင်။
္ဘိုန်ရအခေါင်ပရေင်ပိုန်ဂြပ်ဟွံမွဲပႛဲတဲဇကုကီုလေ၀် ကမေႜာန်ပရေင်ပိုန်ဂြပ်ဂမႜိုင် ညံင်သ္ဂောံနွံပႛဲတဲဂကူဇကုဂှ် သ္ဒးလွှပရာဏောင်။ (ရံင်ဂကူကြုက်ပႛဲမလေယှာအိုတ်ညိ)
သင်ဂမႜိုင်ပိဂိုဏ်တံဂှ် ဗလးစႝးမွဲမွဲဂိုဏ်မသုန်မသုန်ဇကုတဲု သင်ဂမႜိုင်စ်ှသုန်ဇကုဂှ် ဒက်ပတန်ရာမညနိကာယသံဃမဟာနာယကညိ။ ဘာမန်၊ အဲာကၞဲာမန်၊ သာသႝာမန်ဂမႜိုင်တံဂှ် နူကႜာဗၞာတံ ဟွံဂွံကႜုင်ဗာန်လိက်ဏီ ညံင်ဟွံဂွံဒးကလင်ပၞိင်သင်ဗၞာတံဂှ် နူလၞုဟ် ဇိုင်တဲကုဪမြက် ထိင်ဒက်လ၀်ဒတဲုညိ။
လၞိဟ်ဍုင်မန် လၞိဟ်ကွာန်မန် လၞိဟ်ဂကူမန်ဂမႜိုင်ဂှ် ကေတ်စရင်တဲု ပရေင်ပညာ၊ ပရေင်ပိုန်ဂြပ်၊ ပရေင်လိက်ပတ်ယေန်သႝာင်၊ ပရေင်မိႝဟ်ညးဂမႜိုင်တံဂှ် ညံင်သ္ဂောံပြေပြံင်မာန် ဂကောံပရဟိတမန်ဂမႜိုင် ဗွဲမဂႜိုင် ထေက်ကုဪသ္ဒးမံက်ဂတ၀်ကႜုင်ဏောင်။
ကောန်႞ာ်သၞတ်ဂမႜိုင် ညံင်သ္ဂောံကေႜာံဍညးသ္ကံမာန် ဒးဂစာန်ဏောင်။ ဗွဲတေၞင် ကောန်႞ာ်သၞတ်မန်ဂမႜိုင် မစိုပ်မံင်ဍုင်မၝးတံကီု၊ ကောန်႞ာ်သၞတ်မႝုံမံင်ပႛဲတိပႜန်ဂတးတံကီု၊ ကောန်႞ာ်သၞတ်မံႝုမံင်ပႛဲဍုင်မန်တံကီု နကုဪနဲကဲမွဲမွဲသာ် မဒးကေႜာံဍညးသ္ကံဏောင်။
သင်မန်တံလေ၀် ကေတ်လ၀်မွဲအခိုက်ဓ၀် မင်စၞှစဂအုပ်ဒကာတံသၞးသၞး ဟွံထေက်။ ဘ၀ဇကု ဟွံမွဲကုဪဍုင် ကႜိုဟ်ခႜင်ကေတ်တဲု ဒုင်အာဒဒိုက်ကရောံညးဍုင်ကွာန်တံ ဗိုင်ရီုဗင်အာကောန်ဍုင်ကွာန်တံထေက်ရ။ ရံင်ဝင်သိင်ဃိုဠ်မ္ဂး အခိင်ဍုင်သိင်ဃိုဠ်ကျမံင်ဂလာကေႜ၀်တေံ သင်တံသီုဖအိုတ်္ဘးကယိုင်ဒုင်ဂိုင်ကေတ်တာလျိုင်ဂကူဂှ် ဂွံဆုဪကေတ်ရ။ ပႛဲကာလဍုင်ကွာန်္ဘိုဟ်သြိုဟ်ဂှ် ညးတံနိမန်နင်သင်နူဍုင်မန်တဲု ကလေင်လဟဪုပတိုန်သာသႝာပႜန်ဂှ် ဂွံဆုဪကေတ်ရ။ ဂကူမန်ဟွံမွဲ ညးဂှ် သ္ဂောံထႜိုင်ဓာတ်ကျာ်အရိယမေတ္တေယျ ပႛဲကျာ်လ္ဂုင်ပႜန်ညိရော။
ယွံဂကူမန်တံ…ပရေင်ဍုင်ကွာန်ဟီုဂှ် ကျာဝေင်ဆ္ဘိုတ်မိပ်ဓ၀် ဟွံသေင်။ ဆာန်ဂကူဟီုဂှ် ဆ္ဘိုတ်ပြိုင်ဝေင်မာနဓ၀်ဟွံသေင်။ လဆောဝ်မံင်သၝိတ်သၝိတ်မ္ဂး သႝဟွံပကာ၊ လဆောဝ်ဟီုဂႜိုင်မ္ဂး လုပ်အာဂွန်သႝ၊ အခိင်ကဟှမ္ဂးကဟှ အခိင်ချှမ္ဂးချှ အခိင်ဂိုတ်မ္ဂးဂိုတ် ဆဂး ဆလံလ္ပယိုတ်ညိ။ ဥပဵမ္ဂးဂှ် နွံဂႜိုင်ကုဪသာ်…ကာလဒးကုဪကေတ်မ္ဂး ဒးကုဪကေတ်ဏောင်၊ ကာလဒးဓဗတ်မ္ဂး ဒးဓဗတ်ဏောင်၊ ကာလဒးဗဇုဪမ္ဂး ဒးဗဇုဪဏောင်၊ ကာလဒးခႛာတ်မ္ဂး ဒးခႛာတ်ဏောင်။
တိက်မ္ဂး ဒ်ှဍိက်၊ လ္ဇဲုမ္ဂး ဒ်ှဂႜဲု။ ပေဵရဲုစ်ှမဲာဍေံတံ ပဦုပလီုမာန်ဟွံမာန်၊ ပဦုလုပ်ဒုင်ရဲုစ်ှထေက်ဟွံထေက် မိက်ဂွံချပ်ကဪုဒှ် ဟွံမိက်ချပ်ကုဪဒှ် ဆဂး မိက်သ္ဂောံကုဪဂကူမန်တန်တၜအာလုကၜအဓာန်မဂႜိင်သေၝဲာမ္ဂး လေၞင်ကမေႜာန်လ္တူတေံ ဟွံချပ်လေ၀် မံင်ဟွံဂွံ ဟွံကေႜာန်လေ၀် မံင်ဟွံဂွံ။ ဇြဟတ်ဂကူယ၀်သဟွံမွဲ ဂျိပါင်ဂကူလေ၀်ဟွံမွဲ။
မအဍုဪ ဟွံမွဲပႛဲတဲဇကုမ္ဂး ဗီုလုဪသ္ဂောံထဲရော….
ဟိုတ်ဂ်ှရ…၂၀၁၀ တဲုမ္ဂး မအဍုဪ သ္ကုဪနွံပႛဲတဲဇကုညိ။
ဂႜဲာဍ်ာသိုင်ဒႜဲာညိ။ ဂကူမန် သ္ဂောံရာင်ဆဲာရောင်။
Posted by မတ်သာင် at 4:50 PM No comments:
When Obama campaign reached me on phone, I answered to them that I had no right to vote because I was yet an American citizen. I was just granted aslyee to live in the US. Afteralong struggle for my homeland and my life, I have foundaplace that is America my sanctuary to shelter. Landing in Dulles International Airport last year April, I saw at immigration Centerablack guy officer who knew Mon Buddhist Temple in Fort Wayne. At the baggage Claim area, black and white staffs worked together chuckling and laughing. How beautiful America was!
In America, Bush hit unpopular record of 76%. However, he is No.1 in my mind. So is in the heart of the people of Burma. Probably he is hero and savior for the oppressed people across the globe. US authors may find trouble to compileabiography of President George W. Bush. See, popularity may melt down while principality is forever, president said. I love him and I love America. I am comfortable with republican. May be it is because it is Abraham Lincoln’s party rather than I amaconservative.
Myo Zin,aCanadian painter, seeing Chicago’s night inabird’s eye when his flight was approaching O’Hare international airport, screamed “Wow, Beautiful Chicago!” He was Obama’s supporter. He used to say he came here to see Obama’s campaign. He was occupied at my temple though, painting the building and meeting the people.
On November 4, 2008, Chicago night meant perfect to him when his choice won election. Hillary in the primary and McCain in the general election cannot stop Obama’s meteoric rise. Time has picked Obama. Obama won election capturing key battleground states. He made history being elected as first black president. Democrat won big.
Why? The century financial crisis helped elect himalot. In the primary, he started winning Iowa and continuously in Caucuses states. In the general election, Latino Americans voted for him inalarge scale. McCain’s fund is limited and he can ad just one to fifth of Obama. He spread his attack wisely when McCain was accusing him to spread the people wealth. His broad attack was so sound and McCain was overstretched to get to the blue states defending and losing ground in the reds. Independents especially young voters decided this election. Obama reached independent voters’ heart. He heard their voice and felt their issues. The people were more comfortable with Obama’s positive approach on issues than McCain negative campaign. Senior citizen voted for McCain and the young voted for Obama. It could be said young defeated senior.
Though, Collin Powel said Obama’s campaign was inclusive bridging the gap among generations. One thing is for sure Obama actually inspired the country.
Some said he has been elected merely because people were afraid they would lose their jobs and homes.
Obama said: “This is notablack America, notawhite America, notaLatino America and an Asian America. This is the United States of America.”
And he roared: “We are choosing hope over fear. We are choosing unity over division and sendingapowerful message that change is coming to America.”
Beautiful and flowering speech!!
Change has come to America. America is now in new direction. America is going to live inanew era.
225,000 people gathered in Chicago to cheer for Obama. Parents have word to tell their children that they can be what they want to be because Barack Obama has been elected president.
McCain in his gracious confession speech said “When the people of America speak, they speak clearly. When the people speak, we must listen. Obama is now my president and I remain serving this country.”
I honored McCain, an American hero. How humble he was! He conceded his defeat. He went to Chicago to haveaprivate meeting with president elect Obama. The incumbent Bush invited Obama to the White House. They promised to work together to make America prosperous and safe in the competitive and dangerous world. Americans, being divided in the long campaign, turned to unity again.
Obama has reached defeated Hillary’s supporters and again McCain’s supporters. He is talent, intelligent and wow guy. Palin, the Republican vice presidential candidate said she was proud of Obama and she prayed for him. What’s about Abraham Lincoln,aRepublican president who saved the blacks? He may smile seeingablack descendent he fought for defeated his party candidate.
Inagarden orapark, there are blooming blossoms and flowers. They may be in the same or different colors. The more different is the more beautiful. I askedaquestion to an American why America was so great. He said to me it was because America let the different exist. Yes, America isagarden of colorful materially and spiritually.
America is the home of the brave. It is the land of the freedom.
Myo Zin, my Dharma Friend, sees Chicago is beautiful. Now he sees America is beautiful. He may have something to bring to Canada.
I haveaword to tell my friends.
America hasamessage to spread to the world.
America isabeautiful land of democracy like none other.
Posted by မတ်သာင် at 4:37 PM No comments:
ကိုယ်က အာဏာရှင်ကို မုန်းတယ်လို့ဆိုတယ်။ တကယ်ကော မုန်းသလား။ အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်နေပြီလား။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပတ်သက်နေရပြီလား။ အာဏာရှင်ကြောင့် ဒုက္ခတွေရောက်လို့ အာဏာရှင်ကို မုန်းနေရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် အာဏာရှင်ကို မမွေးမိစေနဲ့။ အာဏာရှင်တွေရဲ့သရုပ်သကန် သဘောအမှန်ကို ဆင်ခြင်ပြီး မိမိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အာဏာရှင်ဝါဒ မထွန်းကားအောင် သတိဆောင်ပြီး ကျင့်ကြံကျိုးကုတ် အားထုတ်ပေကြရော့။
Posted by မတ်သာင် at 3:22 AM No comments:
အာဏာရှင်တို့ရဲ့သရုပ်သကန်တွေထဲမှာတစ်ဖက်သတ်ဝါဒကို စွဲကိုင်ခြင်းပါ။ သူတို့က မရှိတဲ့ရန်သူကို (ရှိယင် သူလည်း ကြောက်နေလို့ပါ) လက်ညှိုးထိုးလေ့ ရှိတယ်။ ဥပမာ…မြန်မာစစ်အစိုးရက လက်ရှိအချိန်မှာ ဗြိတိသျှတို့က မြန်မာပြည်ကို ဘာမှလုပ်လို့မရမှန်းသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗြိတိသျှအစိုးရကို လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးပြီး သူတို့မရှိယင် သူ့ကျွန်ဘ၀ပြန်ရောက်သွားမယ် ဒီလိုဝါဒဖြန့်လေ့ ရှိတယ်။ ဗန္ဓုလလိုမျိုး အင်္ဂလိပ်ကို သွားတိုက်ယင် ကျွန်ပြန်ဖြစ်မှာပါပဲ။ ငါ ဗန္ဓုလတဲ့ဟေ့ ဟစ်အော်နေတဲ့ ဗမာ့စစ်သေနာပတိချုပ်ကို ထိုဝင်းလက်လက်နှင့်သူသည် ဗန္ဓုလတည်းဟု စကားပြန်ပြောလို့မှမဆုံးခင် မဟာဗန္ဓုလ အင်္ဂလိပ်အမြောက်ထိလို့ ဓနုဖြူမှာ ကျသွားရပါပြီ။ ဒါဟာ မျက်ကန်းမျိုးချစ်စိတ်ပဲ။
ထိုင်းနဲ့မွန်တို့မှာလည်း အချို့သတ္တိကြောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက ဗမာတွေကို တကယ်ရွံ့ကြောက်ကြတယ်။ သူတို့က ဗမာတွေနဲ့ ရင်မဆိုင်ရဲကြဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့သူရဲဘောကြောင်တာကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ဗမာမုန်းတီးရေးဝါဒကို အစဖော်ကြတယ်။ ဗမာတွေနဲ့ တစ်ခါမှ အတူမနေဖူးဘဲ၊ ဗမာတွေနဲ့ တစ်ပွဲတစ်လမ်းမှ အကဲမစမ်းရသေးဘဲ သူတို့က သူရဲကောင်း ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီလို အရေးကြုံယင် သက်လုံမကောင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်အတုတွေကြောင့်ပဲ ထိုင်းနဲ့မွန်တွေဟာ ဗမာတွေကို အရှုံးကြီး ရှုံးခဲ့ဖူးပါပြီ။
သူမပါယင်မပြီးသမားတွေ သတိထားကြပေတော့။ အဆံမပါယင် သင်္ကြန်အမြောက်ပါပဲ။ ကိုယ်အုပ်စုမှာတော့ ဗိုလ်ပေါ့။ ပွဲလယ်လည်း ရောက်ရော ၀က်ဝက်ကွဲ မဖြစ်စေနဲ့ အာဏာရှင်ပေါက်စတို့ရေ…။
Posted by မတ်သာင် at 3:21 AM No comments:
မြန်မာပြည်က ဦးနှောက်ယိုစီးမှုတွေ ရှိနေတယ်။ လူတော်တွေ ပြည်ပရောက်ကုန်ကြတယ်။ ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေကို ဈေးချိုချိုနဲ့ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယတို့ကို ရောင်းချတာထက် နစ်နာတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ထိုင်ခုံမြဲယင် ပြီးရောလို့ သဘောထားတဲ့စစ်အစိုးရကတော့ မမှုပါဘူး။ အာဏာအတွက်ဆိုယင် သားကောင်ချနင်းရမလား ချမယ်။
သန်းရွှေဆိုတာ ပညာမတတ်တဲ့လူပါ။ စစ်တိုက်တော်တဲ့လူလည်း မဟုတ်ဘူး။ တော်တဲ့လူတွေ သေကုန်ပြီ။ ထောင်ထဲရောက်ကုန်ပြီ။ ဇာဂနာပြောသလို ခေါင်းရှိတဲ့လူတွေ နိုင်ငံခြားထွက်ကုန်ပြီ။ ခေါင်းမပါတဲ့လူတွေပဲ ပြည်တွင်းမှာ ကျန်နေတယ်လို့ ပြက်လုံးထုတ်ပါတယ်။
ဒီထက် ပိုဆိုးတာက တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတွေကို ကင်းစောင့်ခိုင်းတာပါပဲ။ အချို့ နိုင်ငံခြားပြန်ပါမောက္ခဆရာကြီးတွေ ဘတ်စ်ကားတိုးစီးရတုန်း။ ဒီလိုငတ်ပြတ်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေက အမိတိုင်းပြည်စည်ပင်သာယာဝပြောနေပါကြောင်း အာဏာရှင်တွေအတွက် အသံကောင်းဟစ်ပေးရသေးတယ်။ လူသားအရင်းအမြစ် အသုံးချပုံက မှားနေတယ်။ ပညာရေးဟာ နိုင်ငံ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရေသောက်မြစ်ဖြစ်ကြောင်း စာမတတ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက နားလည်ဟန်မတူပါ။
ဆရာတော်တစ်ပါးမိန့်တာ ကြားဖူးတယ်။ ၀ိဝေကာရာမ၀င်းကဆရာတော်ဘုရားက ရတနာကို အဖိုးတန်မှန်းသိတဲ့ထိုင်းဘုရင်နဲ့တွေ့မို့လို့သာပေါ့ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာတာ။ နံ့သာတုံးဟာ ပန်းပုဆရာနဲ့တွေ့မှ ဘုရားရုပ်တုဖြစ်မယ်၊ တံငါသည်နဲ့သွားတိုးယင် စဉ်းနှီးတုံး ဖြစ်ရုံမှတစ်ပါး အခြားမရှိဘူး။ အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ အရာအားလုံးဟာ စဉ်းနှီးတုံးတွေပါပဲ။ သက်မဲ့တွေကိုပဲ ဖြုန်းတာမဟုတ်ဘူး၊ သက်ရှိတွေကိုလည်း တုံးအောင် လုပ်တယ်။
လူမိုက်များတဲ့နေရာမှာ လူမိုက်ပဲ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်။ လူလိမ်မာများတဲ့နေရာမှာ လူလိမ်မာပဲ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်။ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုခုကိုပဲ ကြည့်ကြည့်၊ အစိုးရတစ်ခုခုကိုပဲ ကြည့်ကြည့် အဲဒီအသင်းအဖွဲ့၊ အဲဒီအစိုးရ ဘာအဆင့်လဲ ခေါင်းဆောင်ကို ကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်တယ်။ အမှန်မတော့ အာဏာရှင်တို့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ခေါင်ဆောင်ဆိုတာ မရှိဘူး။ ခေါင်းရှောင်တွေပဲ ရှိပါတယ်။ စွန့်စားရမယ့်ကိစ္စတွေမှာ သူတို့က ရှေ့တန်းကို သိပ်မထွက်ဘူး။ သူ့လူတွေကို တက်ခိုင်းတယ်။ နာမည်ပျက်ရမယ့်နေရာမှာလည်း သူတို့က ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ တိမ်းတတ်ယိမ်းတတ်တယ်။
ကောသလမင်းကြီးအိပ်မက်အတိုင်းပါပဲ။ ဘုရားသားတော်တွေလည်း အသံကလေးစာစာနဲ့ တရားတော်ကို ရောင်းစားကုန်ပြီ။ လူမိုက်တွေပဲ နေရာရပြီး ပညာရှိတွေ တောထဲလစ်ရပြီ။ လူကြီးတွေရဲ့လုပ်အားကို ပြက်ရယ်ပြုပြီး လူငယ်တွေ စော်ကားကုန်ပြီ။ ဒါ အာဏာရှင်တို့အကြိုက် ခေတ်လူမိုက်။
အခြေခံဥပဒေဆန္ဒခံယူပွဲမှာ မဲဆန္ဒ ၉၄%ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း နအဖကျေညာတာ ကြားကြပါလိမ့်မယ်။ အာဏာရှင်တို့ရဲ့သရုပ်သကန်တွေထဲမှာ လူထုအများစုက သူတို့ကို ထောက်ခံနေကြပါကြောင်း ကမ္ဘာကြီးကို ဖြီးဖြန်းထားလေ့ရှိတယ်။ အချို့ဒီမိုကရေစီဆရာတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့က ပြည်သူ့မဲနဲ့တက်လာကြတဲ့လူတွေပါပဲ၊ ဟိုကောင်တွေကို မှုစရာမလိုဘူး၊ အဖက်လုပ်စရာမလိုဘူး မာန်တက်ပြီး အောက်ခြေလွတ်နေလေ့ရှိတယ်။ လူထုထောက်ခံချိန်မှာ ဒါမှမဟုတ် မျက်လှည့်ပြလို့ရနေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့က ဆန့်ကျင်ဘက်တွေကို အပြတ်ရှင်းလေ့ ရှိတယ်။ သူတို့က အခြေခံသဘောတရားတွေကို နားမလည်ကြဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတို့မည်သည်မှာ လိုအပ်ယင် ရန်သူနဲ့တောင် ဆွေးနွေးရပါတယ်။ အာဏာရှင်တို့ရဲ့သဘောသဘာဝကတော့ ဘယ်သူနဲ့မှ မဆွေးနွေးချင်ဘူး။ ငါတို့က အင်အားသာနေတာပဲ။ ငါတို့စကားကိုပဲ နားထောင်ရလိမ့်မယ်။ နားမထောင်ယင် ပညာပြမယ်။
ဒီမိုကရေစီနည်းအရ ရွေးကောက်ခံရတဲ့အစိုးရ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ လူနည်းစုကို စော်ကားမော်ကားပြုဖို့၊ လူနည်းစုကို အနိုင်ကျင့်ဖို့၊ အပြတ်ရှင်းဖို့ မဟုတ်ဘူး။ လူနည်းစုတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့၊ ကျောသားရင်သားမခွဲခြားဘဲ တရားမျှတအောင် အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ ပြည်သူတွေက မဲထည့်လိုက်တာပါ။ တိုင်းပြည်စိုးအုပ် မင်းလုပ်သူတွေအတွက် သူပုန်သူကန်တွေဆိုတာ အိမ်ကနေ ဆင်းသွားတဲ့ရင်သွေးများလိုပါပဲ။ သဘောထားအရမ်းကြီးရတယ်။
သဘောထားကြီးပုံကို သိချင်ယင် အိုဘားမားကို ကြည့်ပါ။ သူက မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ပါတယ်။ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာလည်း သူ့ပါတီအမတ်တွေက လူများစုပါ။ ရီပတ်ဘလီကင်တွေကို ဘေးချိတ်ပြီး လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ရနေတဲ့အခြေအနေမှာ ထင်ရာမစိုင်းဘူး။ အကြိုပွဲမှာ သူ့ကို ရှုံးတဲ့ဟယ်လာရီကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနေရာပေးတယ်။ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ သူ့ကို ရှုံးသွားတဲ့မက်ကိန်းနဲ့လည်း ဆွေးနွေးခဲ့သေးတယ်။ ရီပတ်ဘလီကင်တွေကိုလည်း အစိုးရရာထူးပေးတယ်။ မက်ကိန်းကို ထောက်ခံမိတဲ့ သူ့ပါတီထဲက ဂျိုးလိုင်ဘားမင်းကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ပြီး နေမြဲအတိုင်းထားတယ်။ လူများစုအားနဲ့ လူနည်းစုကို အနိုင်မကျင့်တာဟာ ဒီမိုကရေစီပါ။ လူနည်းစုအသံကိုလည်း နားထောင်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဗမာမှ ဘယ်မွန်ဘုရင်ကို မုန်းကွက်ရှာလို့မရတာကို ကြည့်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ။ မွန်ဘုရင်တွေက လူနည်းစုကို ဘယ်တုန်းကမှ အနိုင်မကျင့်ခဲ့လို့ပဲ။ ရှင်စောပုကို ကရင်ဘုရင်မကဲ့သို့ ကရင်တွေက သဘောထားကြပါတယ်။ ၁၇၅၇ ခုမှာ မွန်တွေမျိုးပြုတ်အသတ်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာတောင် ကရင်၊ ချင်း၊ ၀လူနည်းစုတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်တွေကို မထိပါးဖို့ မွန်ခေါင်းဆောင်တွေက တရားရေးမဏ္ဍိုင်မပြိုလဲအောင် ထိန်းနိုင်သေးတဲ့အထောက်အထားတွေ ရှိတယ်။
ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နဲ့ နေ့တဓူဝ ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိနေတဲ့လူအချို့ဟာ လူများစုအားနဲ့ လူနည်းစုကို အနိုင်ကျင့်ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီနည်းကျတယ်လို့လည်း ထင်မြင်နေကြတယ်။ သူတို့မှာ တိုင်းပြည်အာဏာမရှိသေးဘူး။ ရှိများရှိယင် စစ်အစိုးရထက် ပိုကြောက်စရာကောင်းနေမှာ အမှန်ပါ။ ပြုပြင်သင့်တာရှိယင် ပြုပြင်ဖို့ပါ။ ဖိပြီးညီခိုင်းယင် ဘောလုံးတစ်လုံးကို ရေထဲဖိထားသလိုမျိုးပါ။ လက်လွှတ်သွားယင် ဘောလုံးက ပြန်ကန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အာဏာရှင်အုပ်စိုးတဲ့တိုင်းပြည်မှာလည်း အဲလိုပါပဲ။ သူတို့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ တိုင်းပြည်က ညီညွတ်သယောင် ရှိပါတယ်။ သူတို့တည်ဆောက်ထားတဲ့ညီညွတ်မှုဟာ အမှန်အကန်မဟုတ်တဲ့အတွက် သူတို့သတိတစ်ချက်လက်လွှတ်သွားယင် ပေါက်ကွဲသံစဉ်ကို ခံစားစံစားရပါလိမ့်မယ်။ တူညီယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ထားရုံနဲ့ ညီညွတ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို မဖော်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။
Posted by မတ်သာင် at 3:19 AM No comments:
မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူတိုင်း၊ ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရကို နားလည်သူတိုင်း၊ နိုင်ငံရေးအခြေခံသဘောတရားတွေကို နားလည်သူတိုင်း ထူးခြားတဲ့အမြင်တွေကို ကြိုဆိုကြပါတယ်။ အမြင်မတူသူများ၊ သမာသမတ်ကျသူများ အဖွဲ့ကနေ ထွက်သွားယင် အထီးကျန်သလိုမျိုး ခံစားရတတ်ပါတယ်။ နှမြောတသကြတယ်။ အာဏာရှင်တွေအတွက်တော့ သူ့အတွက် လမ်းကြောင်းရှင်းသွားပြီလို့ပဲ ယူဆပါတယ်။ သူက အမြင်မတူသူတန်ဖိုးကို နားလည်ဟန်မတူပါ။
စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီသမားတို့အတွက် အသက်သွေးကြောဖြစ်ရုံမျှမက တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အတွက် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းခံစားချက်အမှန်ကို လူမျိုးကောင်းစားရေးတံဆိပ်နဲ့ အသေပိတ်ထားယင် မပွင့်လင်းမှုကနေ ပေါက်ကွဲတတ်တယ်။ အာဏာရှင်တွေကတော့ ပေါက်ကွဲမှုကို အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် အသုံးချပြန်တယ်။ နအဖကဲ့သို့ တစ်ရောင်ထဲခြယ်လိုသူများအတွက် လောကရဲ့အလှတရားဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူး။
Posted by မတ်သာင် at 3:18 AM No comments:
သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်က စေတနာ အဓိက၀ါဒပဲ။ သူတို့စေတနာက လူမျိုးကောင်းစားရေးအတွက်ပဲမို့ သူတို့လုပ်သမျှ တရားမျှတတယ်လို့ ခံယူထားတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ခြိမ်းခြောက်မိယင် ဒါမှမဟုတ် စော်ကားမိယင် အဲလိုမျိုး အလွန်အကျွံလုပ်မိလို့ လူထုက နည်းနည်းသတိထားမိလာယင် ကျွန်တော်တို့က ကြမ်းချင်တာမဟုတ်ဘူး၊ ကြမ်းဟန်ဆောင်တာပါ။ လူတွေက တစ်ခါတလေ ကြမ်းပြမှ ရတယ်လေ…ဆိုပြီး မိကျောင်းမျက်ရည်ကျပြလေ့ ရှိတယ်။ အဓိပ္ပါယ်က သူတို့မှာ လူရိုက်ခွင့်လိုင်စင်ရှိသယောင်၊ လူဆဲခွင့်လိုင်စင်ရှိသယောင် ပုံဆောင်ထားတယ်လို့လား။
အာဏာရှင်တွေက လူစုလူဝေးကို မကြိုက်ဘူး။ စစ်အစိုးရကိုကြည့်။ လူငါးယောက်မစုရတဲ့။ ဒါပေမယ့် သူ့အတွက်စုယင် ရတယ်။ အယောက်တစ်သိန်းလား တစ်သန်းလား စုပါ။ အာဏာရှင်တွေက ပါတီများများပေးလေ့ ရှိတယ်။ သူ့နောက်လိုက်တွေကို ၀ဖြီးနေအောင် ကျွေးထားလေ့ရှိတယ်။ သူ့ဆန်စားရဲမှတော့ ဆိုပြီး သူ့တပည့်တွေကလည်း ကျေးဇူးပြန်ဆပ်ရမှန်းနားလည်ပြီးသား။ သူ့အတွက်ဆိုယင် သူ့တပည့်တွေက လူသေကိုတောင် အပုပ်ချရမလား အမနာတမ်း ချပြလေ့ရှိတယ်။
သူ့အိမ်မှာ လူစုယင် သူက ပျော်ပါတယ်။ တစ်ရွာလုံး၊ တစ်မြို့လုံး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့အတင်းကို ပြောကြယင်လည်း အပြစ်မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အိမ်မှာ ဘယ်သူတွေစုနေကြတယ်ဆိုယင် သူမနေတတ်တော့ပါဘူး။ သူ့အတင်းကို ပြောနေကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘယ်အိမ်မှာ ဘယ်သူတွေ စုနေကြတယ်၊ အဖွဲ့မကောင်းကြောင်းတွေ ပြောနေကြတယ်၊ ဒီလူတွေ အဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်နေကြတယ်။ သူက အဖွဲ့ကို ကာကွယ်နေရတယ်။ လူတွေက သူ့ကို မနာလို ဖြစ်နေကြတယ်။ သူ့ကို ရန်လုပ်နေကြတယ်။ တစ်ခါတရံ အထက်လူကြီး မျက်နှာသာရအောင် သူလည်း စိတ်ပျက်ဟန်ဆောင်လေ့ ရှိတယ်။ ဒီအလုပ် မလုပ်ချင်တော့ဘူး၊ နားတော့မယ်၊ ကျွန်တော်မရှိလည်း လုပ်နိုင်တဲ့လူ အများကြီးပဲ၊ ကျွန်တော်လုပ်တာထက်တောင် ပိုကောင်းချင်ကောင်းနေမှာ ဒီလို ပြောတတ်တယ်။ သူ့ကို ဟုတ်တယ်လို့ သွားမဖြေမိစေနဲ့။ မှားသွားမယ်။
အာဏာရှင်တွေရဲ့သရုပ်သကန်တွေထဲမှာ ပြိုင်ဖက်ကို အမြဲတမ်းရှာနေလေ့ ရှိခြင်းပါပဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့် သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်က သူ့ကို မသိပါဘူး။ ဟိုဘက်လူက အေးအေးဆေးဆေးနေလေ့ ရှိပါတယ်။ အမှန်မတော့လည်း တစ်ဖက်လူက ပြိုင်ချင်တာလည်းမဟုတ်၊ ပြိုင်နေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပြေလည်မှုကလေးတစ်ခုရအောင် အာဏာရှင်တွေက ကြံဖန်လေ့ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ လူတွေ သူ့ကို သနားအောင် လုပ်ပါတော့တယ်။ သူက ဟိုလူ့အပေါ် ဒီလောက် အနစ်နာခံတာ၊ ကောင်းအောင် နေပေးတာတောင် သူ့အပေါ်ရက်စက်တယ်ပေါ့။ သူ့ပရိသတ်ဘက်က တုန့်ပြန်မှုကလေး ရလာယင် သူ့ဇာတ်လမ်းကို အစပျိုးပါတော့တယ်။ သူက ပြဿနာအမျိုးမျိုးရှာလာတယ်။ ခြိမ်းခြောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ပရိသတ်တွေက ဒါ တရားမျှတတယ်လို့ ယူဆကြတယ်။
အာဏာရှင်ဆန်တဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ပါတီ၊ အစိုးရမှာ အစည်းအဝေးဆိုတာ ဘာမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ဘူး။ အာဏာချုပ်ကိုင်ထားတဲ့လူက သူဘာကြိုက်လဲ သူ့လူတွေကို ပြောပြထားပြီးသား။ သူ့လူတွေကလည်း သူ့ဆန္ဒကို လွန်ဆန်ပြီး ဘာမှ မပြောရဲကြဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့် အစည်းအဝေးဆိုတာ ရုပ်ပြပါပဲ။ စစ်အစိုးရကျင်းပတဲ့အမျိုးသားညီလာခံကိုကြည့်။ ဆွေးနွေးရမယ့်ခေါင်းစဉ်တွေကို ဦးအောင်တိုးက ရေးပေးပြီးသား။ ဒါကို ဗိုလ်ချုပ်အချို့က အတည်ပြုပြီးသား။ ဒါကိုပဲ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဝေငှပြီးတော့ ဖတ်ခိုင်းတာပဲ။ တော်လှန်ရေးသမားတွေလည်း ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက် တိုက်နေပါတယ်ဆိုပေမယ့် အချို့ အစည်းအဝေးမတိုင်ခင် အချင်းချင်းညှိပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသား ဖြစ်နေတတ်တယ်။ မဲဆန္ဒတွေကို ကြိုလုပ်ထားလေ့ ရှိတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သဘောထားတွေကို တီးခေါက်ထားလေ့ရှိတယ်။ သဘောထားတိုက်ဆိုင်တဲ့လူဆိုယင် အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ယင်တောင် လေ့လာသူအဖြစ် တက်စေလေ့ရှိတယ်။ မဲခွဲဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါ အဲဒီလူတွေကိုလည်း မသိမသာ ပါဝင်စေလေ့ ရှိတယ်။ အချို့အဖွဲ့ဝင်တွေက ဒီနည်း အဆင်မပြေမှန်း သိပေမယ့် အဲဒီလူနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်မှာထက် ခေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ ထမပြောတော့ပါဘူး။ တကယ်လို့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တဲ့ လူဆိုယင် အကြောင်းတစ်ခုခုပြပြီး ဖြောင်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ အချို့အတင့်ရဲတဲ့ အာဏာရှင်ပေါက်စတွေက သိပ်အထာမညက်သေးလို့ ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကို ပြောင်မဖိတ်ဘဲ ထားပါတယ်။
တစ်ခါတလေ ဇာတ်တိုက်ထားပေမယ့် အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်လို့ရှိယင် အစည်းအဝေးကို ရွှေ့ဆိုင်းတာမျိုး၊ သူပဲ ပေါ်ပင်ကိုင်တာမို့ မရေးမှတ်မိပဲ မေ့ကျန်ခဲ့သလိုမျိုး၊ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို မချဖြစ်အောင် အကြံထုတ်တာမျိုး လုပ်တတ်ပါတယ်။ လုံးဝတားလို့မရတော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုယင် လုပ်ကြပါ၊ ကောင်းယင် လက်ခံပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့်နေပါတယ် ထောက်ခံသလိုလို ခြိမ်းခြောက်သလိုလို အပေါ်စီးနဲ့ ပြောတတ်တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီထူးခြားဆုံးဖြတ်ချက်ကို မသိကျိုးကျွံပြုတာတို့၊ အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်အောင် လုပ်တာတို့ အမျိုးမျိုးအနှောင့်အယှက်ပေးလေ့ ရှိတယ်။
အာဏာရှင်မှန်း အသိသာဆုံးအချက်တစ်ချက်ကတော့ အဲဒီအာဏာရှင်ဟာ သူဘာရာထူးကိုပဲရရ ထိပ်ဆုံးက စားပွဲကို ယူထိုင်တတ်တယ်။ သူက ဗဟိုချက်ကို ယူထားတတ်တယ်။ သူ့အထက်အရာရှိတွေ ဘယ်ချောင်ရောက်နေနေ သူဂရုမစိုက်ဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပိုပြီး ရုပ်ပျက်ပါတယ်။ သူ့ကိုတောင် မရွေးရသေးဘူး။ သူက သူ့စားပွဲကို သူ့ဟာသူ ရွေးထားနှင့်ပြီ။
Posted by မတ်သာင် at 3:17 AM No comments:
အာဏာရှင်တွေက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ရဲဘော်ရဲဘက်လို သဘောမထားဘူး။ သူတို့က တော်တဲ့လူကို အရမ်းကြောက်ကြတယ်။ ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတဲ့လူကို အရမ်းသတိထားတယ်။ ဒီလိုလူကို လက်တွေ့မဆန်တဲ့လူ၊ သူက ထောက်ခံချင်ပေမယ့် လူတွေမကြိုက်လို့ မလွဲမရှောင်သာ နေရာပလပ်ခံရသူ၊ မာန်မာနကြီးသူ၊ ပညာမဲ့လူတန်းစားကို စော်ကားတတ်သူ၊ အောက်ခြေလွတ်သူ၊ တစ်ခါတလေ ရန်သူသူလျှိုလို့ ပုံမှားရိုက်ပါတယ်။ သူ့သဘောထားတွေကို သိလို့ ခပ်ဝေးဝေးနေယင် တို့အဖွဲ့မှာ လူလိုနေတယ်။ ပညာတတ်တွေ ရှိယင် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာတတ်တွေက တို့နဲ့ သိပ်မလုပ်ချင်ဘူး ဒီလိုပြောပါတယ်။
သူနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးနေယင်လည်း အကွက်ဆင်ပြီး မသိမသာနှိမ်လေ့ရှိပါတယ်။ အကူအညီယူရမယ့်အချိန်မှာ မျက်ကွယ်မှာပဲ ယူပြီး အောင်ပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်မှာ ကျေးဇူးရှင်ကို အသိပေးလေ့ မရှိပါဘူး။ လူသိထင်ရှားထောပနာပြုမှုတွေ မလုပ်ပါဘူး။ အဲဒီလူက အတွန့်တက်ယင် စိတ်ဓာတ်က အောက်တန်းကျတယ်၊ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကို လိုချင်တယ်၊ အဖွဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး ဒီလိုစွပ်စွဲလာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့လုပ်အားကို အဖွဲ့အမည်ပဲ သုံးမယ်လို့ အသံပေးပြီး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအားကောင်းတဲ့လူတွေ ပွဲထွက်လို့မရအောင် တားတတ်တယ်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လုပ်ယင်လည်း အဖွဲ့ကို စင်ပြိုင်ထူထောင်သူ၊ အဖွဲ့ကို အားခံသူ၊ အဖွဲ့ကို ဖြိုခွဲသူ ဒီလိုကင်းပွန်းတပ်ပြီး ၀မ်းချလေ့ရှိတယ်။ အမှန်မှာတော့ အာဏာရှင်တွေဟာ လူထုလုပ်အားကို ယူပြီး သူတစ်ယောက်ထဲရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ ခံယူချင်တဲ့လူမို့လို့ အဖွဲ့နာမည်တပ်ပြီး လုပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက စားပွဲထိပ်မှာ ထိုင်ပါတယ်။ လက်မှတ်ထိုးစရာရှိယင် သူပဲ ထိုးပါတယ်။ သူ့နာမည်ပဲ သမိုင်းဝင်ပါတယ်။
Posted by မတ်သာင် at 3:16 AM No comments:
အာဏာရှင်တွေက ထင်ပေါ်တဲ့လူတွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ အမြဲချောင်းနေလေ့ရှိတယ်။ သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါ ညစ်ပတ်တဲ့နည်းကို သုံးလေ့ရှိတယ်။ ပထမဆုံးကောလာဟလသတင်းကို လွှင့်မယ်၊ မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံသတင်းတွေကို ဖြန့်မယ်၊ လူတွေက အသိညာဏ်နည်းတော့ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ဖြစ်လာမယ်၊ ဒီအချိန်မှာ သူ့လူတွေကို ပုတ်ခတ်ခိုင်းမယ်။ သူ့အာဏာစက်အောက်မ၀င်တဲ့လူ နလံသိပ်မထူနိုင်တော့ဘူးလို့တွက်ယင် သူက ရှေ့တန်းထွက်လာတယ်။ ထွက်တာတောင်မှ အဓိကရုဏ်းကို ၀င်ထိန်းပေးတဲ့သဘော။ လူကြမ်းက မင်းသမီးကို ၀င်ကယ်တဲ့အခန်းပေါ့။ သူက အလည်အလတ်ဝါဒရှိသယောင်။ သူက နှစ်ဖက်လှကိုယ်တော်ပေါ့။ ဒီအချိန်မှာ ဟိုလူက သူ့ကို အောက်ကျို့ယင် ခါးပိုက်ထဲထည့်ထားရုံပဲ။ သူ့ဘက်မပါယင် အကြွင်းမဲ့ ဘ၀ဖျက်လိုက်မယ်။ ဒါပါပဲ။ မပိုင်ယင် မကိုင်ဘူး။
Posted by မတ်သာင် at 3:15 AM No comments:
အာဏာရှင်တွေ အကြောက်ဆုံးမှာ ပညာတတ်တွေပဲ။ ပညာတတ်တွေ များလာယင် သူ မှိုင်းတိုက်လို့မရတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ပညာရေးကိုနှိမ့်ချထားလေ့ရှိတယ်။ မိမိအာဏာကို တည်ဆောက်ရာမှာ ပညာရေးကိုတောင် အလွတ်မပေးဘူး။ မှိုင်းတိုက်တယ်။ ဥပမာ…ပညာရေးတက္ကသိုလ်တွေအတွက် ပံ့ပိုးမှုမလုပ်ဘဲ အာဏာရှင်လက်အောက်တိုက်ရိုက်ရောက်နေတဲ့ စစ်တက္ကသိုလ်တို့လိုဟာမျိုး အားပေးတယ်။ သာမန်တက္ကသိုလ်မှာ အဆင့်မရှိတော့ လူတွေကလည်း စစ်တက္ကသိုလ်ကိုပဲ သားသမီးတွေပို့ကြတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ စစ်ဘင်ခရာတွေကိုပဲ ကြားရအောင် ဖန်တီးထားတယ်။
အာဏာရှင်တွေက နိုင်ငံကာကွယ်ရေးကို အသားပေးပြောလေ့ရှိတယ်။
မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြက်ရေးအကြောင်းတွေ လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး ပြောလေ့ရှိတယ်။ အမှန်မှာတော့ နိုင်ငံကာကွယ်ရေးထက် အဖွဲ့အစည်းကာကွယ်ရေး၊ အဖွဲ့အစည်းကာကွယ်ရေးထက် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးကို ဦးစားပေးတတ်တယ်။ အာဏာရှင်တွေက အခုနမှိုင်းမိအင်အားနဲ့ ပညာတတ်တွေကို စိန်ခေါ်လေ့ရှိတယ်။ အလုပ်လုပ်ရာမှာ အဲဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေ ရှိတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေကို လူတိုင်း သိသင့်တယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေကို အာဏာရှင်တွေက သူနဲ့သူစိတ်ချလို့ရတဲ့လူအနည်းအကျဉ်းကိုပဲ သိခွင့်ပြုတယ်။ သူ့နောက်လိုက်တွေကိုလည်း သိခွင့်မပြုဘူး။ ပညာတတ်တွေလည်း ဒီကိစ္စကို စိတ်မ၀င်စားတတ်ကြဘူး။ သူတို့က သူတို့ဘာသာရပ်နယ်ပယ်ကိုပဲ ဖိပြီး လုပ်နေတတ်တယ်။
Posted by မတ်သာင် at 3:12 AM No comments:
Obama signed in and Bush signed off. McCain was there in Obama's inauguration. They openly debated along the campaign. They declared victory and conceded the defeat. And they kept their country going.
No one cannot stop Obama's meteoric rise. all attempts had failed. As Obama put it, This is notaconservative America, notaliberal America but the United States of America. People choose hope over fear. And they elected the most active president in the US history. Furthermore, he isablack,aslave descendant. In the land where their owners founded, their descendant is elected president now.
Since minority becameapresident, anything is possible in this promised land. Everyone in America can dream of their future and they haveaword to tell their off-springs. Marta Luther King Jr. has dream ofablack president. Today his dream comes true.
Posted by မတ်သာင် at 10:50 PM No comments:
(၂) အာဏာရှင်တွေကို ဘယ်သူက မွေးထုတ်ပေးလဲ
တို့တတွေပါပဲ။ အာဏာရှင်တွေက လူတွေရဲ့အားနည်းချက်ကို သိတယ်။ အားအနည်းဆုံးအချက်မှာ ဆင်ခြင်တုံတရား။ လူတွေက စိတ်ကူးယဉ်တာ ၀ါသနာပါပေမယ့် အရာရာကို အလေးထားဖို့ ပျင်းတယ်။ သမိုင်းကို ပြောယင် လှံထမ်းနေရဦးမယ်။ မနေ့ကအကြောင်းကိုတောင် မေ့ချင်နေသေး။ ကိုယ်ဘာကြိုက်တတ်သလဲ ဒါကို ကိုယ်က သတိမထားမိဘူး။ အာဏာရှင်တွေက သိနေပြီ။ သူတို့က ဒီလိုင်းမှာ အထာညက်တယ်။ ကိုယ်အစည်းရုံးခံလိုက်ရပြီဆိုတာတောင် ကိုယ် မသိလိုက်ဘူး။ သတိထားမိဖို့ နေနေသာသာ။ အာဏာရှင်ကိုတောင် အကာအကွယ်ပေးမိပြီးသား ဖြစ်နေမယ်။
အာဏာရှင်တွေက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကို အားပေးတယ်။ သူက အဖွဲ့အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တယ်၊ သူမပါယင် မပြီးဘူး၊ အဖွဲ့ထဲ သူပဲ ကိုယ်ကျိုးစွန့်တယ်၊ သူက အဖွဲ့အတွက်ပဲ စဉ်းစားတယ် ဒီလိုသရုပ်သကန်မျိုးဖြစ်အောင် အရင်လုပ်တယ်။ များသောအားဖြင့် အာဏာရှင်တို့ရဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ပညာတတ်တွေ ရှိလေ့မရှိဘူး။ သူ့မှိုင်းမိနေတဲ့လူတွေပဲ ရစ်ဝဲနေလေ့ရှိတယ်။ အာဏာရှင်တွေ အပြင်ပန်းမှာ အရမ်းကို သဘောထားပြည့်ဝတဲ့လူတွေပါပဲ။ ပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းရံနေတဲ့လူတွေက သူ့တို့ကို ဘုရားတစ်ဆူ ဂူတစ်လုံးလို တကယ်ထောက်ခံနေတာပါ။ သူတစ်ယောက်ထဲပဲ မှန်နေပြီ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှားနေတယ်လို့ ထင်နေတတ်ကြတယ်။ ဒီမျိုးစေ့ကနေပဲ အာဏာရှင်တွေ ပေါက်ဖွားလာတာပါ။
Posted by မတ်သာင် at 3:09 AM No comments:
တို့လို လူတွေပဲ။ ချိုထွက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ နည်းနည်းကွာတာက သူတို့က သတ္တိနည်းနည်းပိုကြောင်တယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေကိုပဲကြည့်။ သူတို့က ဆာလို့ အန္တရာယ်ပေးတယ်။ စိတ်တိုလို့ အန္တရာယ်ပေးတယ်။ နောက်ပြီး ကြောင်လို့ အန္တရာယ်ပေးတယ်။ တောထဲ အသံပေးလျှောက်သွားယင် သားရဲတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ တိုးခဲတယ်။ သူတို့က လူသံကြားလို့ အချိန်မီတိမ်းရှောင်နိုင်လို့ပေါ့။
အာဏာရှင်တွေက သတ္တိကောင်းလို့ ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ သတ္တိကြောင်လို့။ သူတို့က တိရစ္ဆာန်တွေထက် ပိုညစ်ပတ်တာက သူတို့သတ္တိကြောင်တာကို လူသိရှင်ကြား ၀န်မခံရဲကြဘူး။ အမြီးမရှိလို့ ဖုံးကွယ်လို့ရတယ်။ ဒါဆို အာဏာရှင်တွေဆိုတာ လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကြားမှာ အဆင့်ရှိတယ်။ လူစဉ်မမီ တိရစ္ဆာန်စဉ်မမီ ဘ၀မျိုးပေါ့။
Posted by မတ်သာင် at 2:58 AM No comments:
Posted by မတ်သာင် at 2:47 AM No comments:
A Dhamma Talk at Canterburry School
I haveaDhamma talk at the Canterburry School in the invitation of the School. Kat Lun, one of my follower and student of Canterburry, celebrated the talk asavery successful one since all of the audience were pleased and delighted with the talk. Questions mostly asked by the students were basic Buddhism. ...
Posted by မတ်သာင် at 4:43 AM No comments:
သွက်ဂွံဘိက်ပါမောက္ခဆာန် ညံင်သ္ဂောံဒယှေ်ဒွက် ပႛဲဍုင်အမေရိကာန်မာန်ဂှ် နူကုဪဂကောံ M3 (Mon Modern Music) တံ ဍိုက်ကႛိုပ်တဲု ကေႜာန်ဗဒ်ှဏာ ပေဵကောံဓရီုမွဲ ပႛဲဘာဗုဒ္ဓဘာသာမန်၊ ဍုင်ဝှတ်ဝုင်၊ တွုဪရးအေန်ဒှယျာဏာ၊ ကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန်ရ။ ပႛဲကောံဓရီုဂှ် အ္စာ Jim နူဍုင်နျူယျံက်တေံလေ၀် တိုန်စိုပ်တဲု ပႛဲဂကောံဘိက်ပါမောက္ခဆာန်ဂှ် နဒဒ်ှဒုဥက္ကဋ္ဌ ကေတ်လ၀်တာလျိုင်ကီုရ။ ကိစ္စပါမောက္ခဆာန် မကႜုင်စိုပ်ကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန်ဝွံ ဂကူမန်မတန်တၜမံင် ပႛဲကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန်ဗွဲမဂႜိုင် စိုတ်လုပ်စတဲု ယ၀်သအခက်အခဲုဗှသာ (Visa) ဟွံမွဲမ္ဂး ပႛဲဂိတုႚဗြၜသဘင်အတးသင်္ကြာန်ဝွံ ပရိသာတ်တံ ဂွံဗုဪဂွံကလင် ဂွံဒုင်စသိုင်ရ်ှသာဒွက်ဂီတမန်ဖတ်ဖတ်လတ်လတ်ရောင် ဂွံလ၀်ပရိုင်ရ။
Posted by မတ်သာင် at 11:06 PM No comments:
Mon Cultural Dance to be performed in Ivy Tech Com...